ဆုလာဘ်နှင့်မုန်းတီးခြင်း၏ဇီဝဗေဒအလွှာများ - နျူကလိယလှုပ်ရှားမှုအယူအဆကို accumbens (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌လောင်း
ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဇီဝအလွှာ: တစ်နျူကလိယ accumbens လှုပ်ရှားမှုအယူအဆ (2009)
မှတ်ချက်များ - dopamine နှင့်နျူကလိယအားအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ဆုလာဘ်နှင့်မုန်းတီးခြင်း၌အကျုံးဝင်သည်။
ဝီလျံအေ Carlezon ဂျူနီယာ1 နှင့် မာကုဂျေသောမတ်စ်2
အဆိုပါနျူကလိယ accumbens (NAc) ကို mesocorticolimbic စနစ်, ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရတစ်ဦးနှောက်ဆားကစ်၏အရေးပါသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ဤသည် Basal forebrain ဖွဲ့စည်းပုံဟာ prefrontal cortex (PFC), amygdala (AMG က), နှင့် hippocampus (HIP) အပါအဝင်ဒေသများထံမှ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှ dopamine (DA) input ကိုများနှင့်အချိုမှု (GLU) input ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်အရေးယူမှုနှင့်အတူလှုံ့ဆျောမှုဆက်သွယ်ထားသော, limbic နှင့် cortical ဒေသများထံမှသွင်းအားစုပေါင်းစပ်။ အဆိုပါ NAc အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာထူထောင်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ သို့သော်မော်လီကျူး, pharmacological စုဆောင်းနှင့် electrophysiological သက်သေအထောက်အထားလည်းဆန္ဒရှိပြည်နယ်များဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါသော (နှင့်တခါတရံ underappreciated) အခန်းကဏ္ဍကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များဒီဒေသမှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်များ၏အများစုသည်အဘို့အကောင့်ရာ NAc အလတ်စား spiny GABAergic အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်း encoded ဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်။ ဝန်ခံရမည်ရိုးရှင်းသောနေစဉ်, ဒီအလုပ်လုပ်အယူအဆ electrophysiology, မျိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်အပါအဝင်ရှိနိုင်ပါနှင့်ထွန်းသစ်စနည်းပညာများ၏ပေါင်းစပ် အသုံးပြု. testable ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားချက်ပြည်နယ်များ၏အခြေခံ neurobiology ၏တစ်ဦးကပိုမိုနက်ရှိုင်းနားလည်မှုဆက်ဆံပါနဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များ dysregulation နှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားအခြေအနေများ (ဥပမာစိတ်ဓါတ်များမမှန်) တားဆီးကြောင်းကောင်းစွာသည်းခံဆေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အဖြစ်စိတ်ဓါတ်များ-related ပြည်နယ်များ၏ဇီဝအခြေခံနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။ ဤအပြည်နယ်များ၏ဂန္ထဝင်ဖော်မြူလာ (ဆုလာဘ်ထဲမှာ, NAc, VTA နှင့် PFC အပါအဝင်ဦးနှောက်ဧရိယာများပါဝင်သည်, အ mesocorticolimbic system ကို ဆက်စပ်. အBozarth နှင့်ပညာရှိ, 1981; Goeders နှင့်စမစ်, 1983; ပညာရှိRompré, 1989) ။ အဆိုပါ amygdala, periaquaductal မီးခိုးရောင်နှင့်, locus coeruleus အပါအဝင်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများ, မကြာခဏ (ခြင်းကိုမနှစ်သက်အတွက် Aghajanian, 1978 ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြသည်; Phillips ကနှင့် LePaine, 1980; Bozarth နှင့်ပညာရှိ, 1983) ။ သို့သျောလညျးအခြို့သောဦးနှောက်ဧရိယာများကျဉ်းမြောင်းစွာနဲ့ rigidly ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဖျန်ဖြေသောအယူအဆရှေးကသြောဖြစ်လာနေသည်။ ပို. ပို. ခေတ်မီကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုယခင်က detect လုပ်ဖို့ခက်ခဲ (လျှင်မမဖြစ်နိုင်တဲ့) ဖြစ်ရပြီမယ်လို့သက်ရောက်မှုများအတွက်အထောက်အထားများကိုအသစ်ချဉ်းကပ် enabled သိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အနေဖြင့်တဦးတည်းသာဓကအဖြစ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့ neuroadaptation (ထိုကူးယူအချက် CREB ၏ activation) ကိုကြည့်ပါ, ပြန်လည်သုံးသပ် (ကြွက်နှင့်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များကဲ့သို့ depressive ကိုအထောက်အကူပြုရန်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုအားဖြင့် NAc အတွက်အစပျိုးကြောင်းတွေ့ကြပြီ Carlezon et al ။ , 2005) ။ အခွားသောအလုပ်ဖြစ်သော PFC, AMG ကအဖြစ်ဒေသများထံမှ glutamatergic သွင်းအားစုနှင့်အတူပေါင်းစည်းသော VTA-သော NAc မှသွင်းအားစုကိုထောက်ပံ့ပေးအတွက် dopaminergic အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့် HIP-နိုင်ပါတယ်လည်း (အကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးပြည်နယ်များဝှက်ကြောင်းအကြံပြုလျူ et al ။ , 2008).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ရိုးရှင်းပြည်နယ်များအတွက် NAc ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအပြည်နယ်များအတှေ့အကွုံ-မှီခို neuroadaptations အပေါ်သို့မှီခိုအလွယ်တကူကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များ၏အခြေခံအယူအဆရေးရာပေါ်သို့ map ပါဘူးကတည်းကထိုကဲ့သို့မူးယစ်ဆေး-တဏှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာအဖြစ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြည်နယ်များအတွက် NAc လှုပ်ရှားမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို, ဒီပြန်လည်သုံးသပ်၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ neurobiology တစ်ခုတိုးတက်လာသောနားလည်မှုစွဲတူသောရှုပ်ထွေးသောရောဂါကုသမှုမှအရေးပါသည်။ လယ်ပြင်၌စွဲလမ်းမမှန်များအတွက်ကုသမှု၏ဆင်ခြင်တုံတရားဒီဇိုင်းဆီသို့ရွှေ့ဖို့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်သုတေသနပြုဆယ်စုနှစ်များစွာကနေစုဆောင်းအသိပညာအသုံးချအဖြစ်ဤမေးခွန်းကိုအထူးအရေးကြီးပါသည်။ အသစ်ကဆေးဝါးများအတွက်လိုအပ်ချက်အတွက်မျှသာမူးယစ်ဆေး-တဏှာ၏လျှော့ချရေး, မူးယစ်ဆေး-ရှာ, သို့မဟုတ်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုကျော်လွန်တတ်၏။ ထိရောက်သောကုထုံးဖြစ်စေရန်, တစ်ဦးဆေးဟာစွဲဦးနှောက်, ဒါမှမဟုတ်လိုက်နာမှုအားဖြင့်သည်းခံရမည်ဖြစ်သည် (တစ်ခါတစ်ရံလိုက်နာမှုခေါ်) ဆင်းရဲသားကိုရလိမ့်မည်။ အရက်၏စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့် opiates- မှလွဲ. စွဲမကြာခဏဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုများနှင့်အဆက်ဖြတ်ကုသမှုကိုသတင်းပို့ကြောင်းများအတွက်ထူးခြားသောအလားအလာရှိသည်ဖို့တိရိစ္ဆာန်အချက်အလက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာပေါ်လာမယ်လို့ဆေးဝါးများဥပမာ (ဥပမာ naltrexone) (ပြီးသားရှိပါတယ်Weiss et al ။ , 2004) ။ ပုံမှန်နှင့်စွဲဦးနှောက်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့နည်းလမ်းများမူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, ဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်စွဲလမ်းရာမှပြန်လည်နာလန်ထူ၏အရှိန်အဟုန်အရှိန်အဟုန်မြှင့်လိမ့်မယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များ NAc အလတ်စား spiny GABAergic အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် encoded သောရိုးရှင်းသောအလုပ်လုပ်အယူအဆအဘို့သက်သေအထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်။
II ကို။ အဆိုပါ NAc
အဆိုပါ NAc အဆိုပါ striatum ရဲ့ ventral အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်သည့် NAc သည် core နဲ့ differential ကိုသွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနေကြတယ်သော shell ကို, (ကြည့်ရှုနှစ်ခုအဓိကအလုပ်လုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်လက်ခံသည် Zahm, 1999; ကယ်လီ, 2004; Surmeier et al ။ , 2007) ။ မကြာသေးမှီကဖော်မြူလာနောက်ထပ် ((အကန်တော့ချွန်နှင့် NAc shell ကို၏အလယ်အလတ်ဇုန်အပါအဝင်) အပိုဆောင်းငျဒသေသို့နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများကိုဝေTodtenkopf နှင့်ကြယ်, 2000) ။ အဆိုပါ dorsal striatum ၌ရှိသကဲ့သို့, ဂါဘမြို့သားပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs) ကျန်ရှိနေသေးသောဆဲလ် cholinergic နှင့် GABAergic interneurons (ဖြစ်ခြင်းနှင့်တကွ, NAc အတွက်ဆဲလ်များ၏ကျယ်ပြန့်အများစု (~ 90-95%) အထိအောင်Meredith, 1999) ။ ဒါခေါ် "တိုက်ရိုက်" ၏ရှိသူများနှင့် "သွယ်ဝိုက်" လမ်းကြောင်း (Striatal ဒေသများသည်ဤ MSNs ၏ subpopulations ဆံ့Gerfen et al ။ , 1990; Surmeier et al ။ , 2007) ။ တိုက်ရိုက်အများစု Co-အမြန် dopamine D1 ကဲ့သို့ receptors နှင့် endogenous opioid peptide dynorphin လမ်းကြောင်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ပြန် midbrain (substantia nigra / VTA) ကိုစီမံကိနျး၏ MSNs ။ ဆနျ့ကငျြဘမှာအများစုအတွက်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏ MSNs Co-အမြန် dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors နှင့် endogenous opioid peptide enkephalin, နှင့် midbrain မှသွယ်ဝိုက်စီမံကိန်းသည် ventral pallidum နှင့် subthalamic နျူကလိယအပါအဝင်ဒေသများကနေတစ်ဆင့်။ ရိုးရာဖော်မြူလာ G-ပရိုတိန်း, G ဖို့ coupled ထားတဲ့ D1 ကဲ့သို့ receptors မှာကြောင်း dopamine လုပ်ရပ်တွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့s (stimulatory) နှင့် adenylate cyclase ၏ activation နှင့်ဆက်စပ် (တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း၏ MSNs excite လေ့Albin et al ။ , 1989; Surmeier et al ။ , 2007) ။ ဤအဆဲလ် elevated လှုပ်ရှားမှုဟာ mesolimbic စနစ်တိုးမြှင့ GABAergic နှင့် dynorphin (κ-opioid receptors မှာ endogenous ligand) input ကိုနှင့် midbrain dopamine ဆဲလ်အပေါ်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်များကိုမျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ , G ဖို့ coupled ထားတဲ့ D2 ကဲ့သို့ receptors မှာမတူဘဲ, dopamine လုပ်ရပ်များi (inhibitory) နှင့် adenylate cyclase ၏တားစီးနှင့်အတူဆက်နွယ်, (ပုသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏ MSNs တားစီးလေ့Albin et al ။ , 1989; Surmeier et al ။ , 2007) ။ ဤအဆဲလ်၏တားစီး GABAergic နှင့် enkephalin (δ-opioid receptors မှာ endogenous ligand) ကို ventral pallidum မှ input ကို, ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ thalamus မှ inhibitory သွင်းအားစုကိုသက်ဝင်သည်ဟု subthalamic ဆဲလ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်တဲ့ဒေသလျှော့ချရန်မျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ မျိုးစုံ Synaptic ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်, အ NAc များ၏အဆင့်မှာသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏တားစီးနောက်ဆုံးမှာတွေ့မြင်ပါ (thalamus ကိုသက်ဝင်မယ်လို့ ကယ်လီ, 2004).
ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးတွင် neuron ကဲ့သို့ပင် MSNs လည်းအချိုမှု-အထိခိုက်မခံ AMPA နှင့် NMDA receptors ဖော်ပြ။ ဤရွေ့ကား receptors အချိုမှုထိုကဲ့သို့သော AMG ကအဖြစ်ဦးနှောက်ဧရိယာများထံမှသွင်းအားစု, HIP, နှင့် PFC ၏နက်ရှိုင်းသော (infralimbic) အလွှာ (enableO'Donnell နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 1995; ကယ်လီ et al ။ , 2004; ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007) NAc MSNs ကိုသက်ဝင်ရန်။ Dopamine နှင့်အချိုမှုသွင်းအားစုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ဥပမာ D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ဆွအချိုမှု (AMPA နှင့် NMDA) ၏ phosphorylation ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲဒီ receptor subunits, အားဖြင့်မိမိတို့၏မျက်နှာပြင်စကားရပ်နှင့် subunit ဖွဲ့စည်းမှုကိုထိန်းညှိ (Snyder et al ။ , 2000; Chao et al ။ , 2002; Mangiavacchi et al ။ , 2004; Chartoff et al ။ , 2006; Hallett et al ။ , 2006; နေရောင် et al ။ , 2008) ။ အရှင် NAc excitatory အချိုမှုသွင်းအားစု, တစ်ခါတစ်ရံ excitatory dopamine (D1-လိုမျိုး) သွင်းအားစုများနှင့်တခါတရံ inhibitory dopamine (D2-လိုမျိုး) သွင်းအားစု၏ရှုပ်ထွေးသောပေါင်းစည်းမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ VTA ယူနီဖောင်းတစ်တုံ့ပြန်မှု-activation-မှအကြိုး (ဥပမာ, မော်ဖင်းအကိုက်နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်ဖို့လေ့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား; တွေ့မြင် DiChiara နှင့် Imperato, 1988; Leone et al ။ , 1991; ဂျွန်ဆင်နှင့်မြောက်, 1992) နှင့်ဆန္ဒရှိ (Dunn, 1988; Herman et al ။ , 1988; Kalivas နှင့် Duffy, 1989; McFarland et al ။ , 2004) လှုံ့ဆော်မှု, mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏မြစ်အောက်ပိုင်းကဤ excitatory နှင့် inhibitory အချက်ပြမှုများကိုပေါင်းစပ်ဖို့ NAc များ၏စွမ်းရည်ကိုဖွယ်ရှိ valence ပူးတွဲခြင်းနှင့်စိတ်ဓါတ်များကိုထိန်းညှိအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
III ကို။ ကြိုးပြည်နယ်များအတွက် NAc ၏အခန်းက္ပ
ဒါဟာ NAc ဆုလာဘ်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းကောင်းစွာလက်ခံသည်။ လှုံ့ဆျောမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. သီအိုရီစွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှု (; Rompréနှင့်ပညာရှိ, 1987 ဥပမာ Bozarth နှင့်ပညာရှိ, 1989) တွင်အရေးပါသောဒြပ်စင်ခဲ့ကြပြီ။ ဆုလာဘ်အတွက် NAc implicating အထောက်အထား3မူလတန်းလိုင်းများ, pharmacological မော်လီကျူးများနှင့် electrophysiological ချဉ်းကပ်မှုနှငျ့ပတျသကျရှိပါတယ်။
A. အ Pharmacological သက်သေအထောက်အထား
ဒါဟာကောင်းစွာ (အလွဲသုံးစားမှုကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်di Chiara နှင့် Imperato, 1988) နှင့်သဘာဝဆုလာဘ် (Fibiger et al ။ , 1992; Pfaus, 1999; ကယ်လီ, 2004) ကို NAc အတွက် dopamine ၏ extracellular ပြင်းအားမြှများ၏ဘုံအရေးယူရှိသည်။ ထို့အပြင် NAc ၏တွေ့ရှိရပါသည်စိတ်ကြွဆေးနှင့် opiates ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချ (ရောဘတ် et al ။ , 1980; Kelsey et al ။ , 1989) ။ ကြွက်များတွင်ဆေးဝါးဗေဒလေ့လာမှုများ (ဥပမာ, ကာဣန et al ။ , 1999) နှင့်မျောက် (ဥပမာ, ကာဣန et al ။ , 2000) D2 တူသောအဲဒီ receptor function ကိုဆုလာဘ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကြိုးပြည်နယ်များအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးသက်သေအထောက်အထားပေးသောဤဧရိယာသို့မူးယစ်ဆေးတိုက်ရိုက် microinfusion နှငျ့ပတျသကျသောလေ့လာမှုများဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်တို့သည် NAc (သို့တိုက်ရိုက်အေးဂျင့်စိတ်ကြွဆေးထွက်ရှိသည့် dopamine Self-စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်Hoebel et al ။ , 1983), ဤဒေသတွင် extracellular dopamine မြှအတွက်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဆန္ဒပြ။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုစိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူအစီရင်ခံဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အားနည်းနေပေမယ့်ကြွက်လည်း (ယင်း NAc သို့ dopamine reuptake inhibitor ကိုကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်Carlezon et al ။ , 1995) ။ ဤသည်လေ့လာရေးကို (olfactory tubercle အပါအဝင်ဒေသများရှိ, ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများ NAc အပြင်ဘက်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်ထင်ကြေးမှဦးဆောင်ထားပါတယ်Ikemoto, 2003) ။ သို့သော်ကြွက် avidly အဆိုပါ NAc သို့ dopamine reuptake inhibitor nomifensine Self-စီမံခန့်ခွဲကြလိမ့်မည် (Carlezon et al ။ , 1995), ကိုကင်းများ၏ဒေသခံထုံဆေးဂုဏ်သတ္တိများမူးယစ်ဆေးအာရုံခံတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားသောလေ့လာမှုများရှုပ်ထွေးကြောင်းအကြံပြု။ အဆိုပါ dopamine D2-ရွေးချယ်ရန် sulpiride ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc microinfusions အတွက် D2 ကဲ့သို့ receptors များအတွက် key ကိုအခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြ, nomifensine ၏ intracranial Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates ၏ co-ပြုတ်ရည်။ (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Rompréနှင့်ပညာရှိ, 1989 ကိုကြည့်ပါ) ကိုအခြားလေ့လာမှုများအမျိုးမျိုးကနေသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲဒီလေ့လာမှု NAc အတွက် dopamine လုပ်ရပ်များဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောအခန်းကဏ္ဍသော 1980 ရဲ့ရေပန်းစားသီအိုရီတွေနဲ့လုံးဝကိုက်ညီ ။
အဆိုပါ NAc အတွက် dopamine လုပ်ရပ်များအကျိုးသည်လုံလောက်သောကြောင်းအနည်းငယ်သာအငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိစဉ်အခါ, အခြားအလုပ်သူတို့လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းအယူအဆစိန်ခေါ်လာကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်တို့သည် NAc (သို့တိုက်ရိုက်မော်ဖင်းအကိုက် Self-စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်ကြားရှိ, 1982), ကွာမူးယစ်ဆေးဝါး NAc အတွက် extracellular dopamine ခြီးမွှောမှပြုမူထားတဲ့အတွက်ခလုတ်ဇုန်ကို (VTA) (ထံမှLeone et al ။ , 1991; ဂျွန်ဆင်နှင့်မြောက်, 1992) ။ μ-နှင့်δ-opioid receptors NAc MSNs (အပေါ်တိုက်ရိုက်တည်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားMansour et al ။ , 1995) ဤဒေတာကြောင့်ဆုလာဘ် dopamine ခြင်းဖြင့်အစပျိုးသောသူတို့အား) ၏ (သို့မဟုတ်မြစ်အောက်ပိုင်းနှင့်အတူအပြိုင်ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ကြွက်လည်းတိုက်ရိုက် NAc (သို့ phencyclidine (PCP), တစ်ဦး dopamine reuptake inhibitor နှင့် non-ယှဉ်ပြိုင် NMDA ရန်သောရှုပ်ထွေးသောမူးယစ်ဆေး Self-စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်Carlezon နှင့်ပညာရှိ, 1996) ။ သက်သေအထောက်အထားနှစျယောကျလိုင်းများဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု dopamine-မှီခိုမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ PCP ၏ intracranial Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် dopamine D2-ရွေးချယ်ရန် sulpiride ၏ Co-ပြုတ်ရည်များကမထိခိုက်လျက်ရှိ၏ နှင့်ဒုတိယကြွက် (တိုက်ရိုက် NAc သို့ Non-ယှဉ်ပြိုင်သည်အခြား Self-စီမံခန့်ခွဲ (MK-801) သို့မဟုတ်ယှဉ်ပြိုင် (CPP က) dopamine စနစ်များမကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူ NMDA ရန်လိမ့်မည်Carlezon နှင့်ပညာရှိ, 1996) ။ ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များကို NAc အတွက် NMDA receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအကျိုးသည်လုံလောက်သောသည်နှင့်, extension ကိုအသုံးပြုပုံဆုလာဘ် dopamine-လွတ်လပ်သောဖြစ်နိုင်သည်ကိုအစောပိုင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။ NMDA receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (AMPA receptors ကကမကထပြုခဲ့အခြေခံ excitatory input ကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ NAc MSNs ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်ခုခြုံငုံလျှော့ချထုတ်လုပ်ရန်မျှော်မှန်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်းUchimura et al ။ , 1989; Pennartz et al ။ 1990) ။ အဆိုပါ PFC ၏နက်ရှိုင်းသောအလွှာသို့အရေးကြီးတာက, ကြွက်လည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ NMDA ရန် (Carlezon နှင့်ပညာရှိ, 1996အဆိုပါ NAc တိုက်ရိုက်), အရာသည်စီမံကိန်း (ကြည့်ရှု ကယ်လီ, 2004) နှင့် (( "ရပ်ရန်!") တစ်ဦး inhibitory ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုး circuit ကို conceptualized ပြီChildress, 2006) ။ အတူတကွထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအလုပ်လုပ်အယူအဆ၏ရေးဆွဲရေးအတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါပွီအထောက်အထားနှစ်ခုအရေးပါသောအပိုင်းပိုင်းပေးအပ်သည်ဤလေ့လာမှုများ: ပထမဦးဆုံးသော dopamine-မှီခိုဆုလာဘ်အများစုနေထိုင်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆို inhibitory receptors နေသော D2 ကဲ့သို့ receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့် attenuated ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏ MSNs အပေါ် NAc ပြခြင်း, နှင့်ဒုတိယ, G ၏ NAc ၏ခြုံငုံစိတ်လှုပ်ရှားလျှော့ချရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်လို့ဖြစ်ရပ်များ (ဥပမာဆွကြောင်းi, opioid receptors -coupled excitatory NMDA receptors ၏ဆွလျှော့ချ, excitatory input ကိုလျှော့ချ) အကျိုးသည်လုံလောက်သောဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်အနက်ကိုထိုအရေးပါသောအဖြစ်အပျက်ဟာ NAc (ထဲမှာ MSNs ၏ activation လျှော့ချသောဆုလာဘ်တစ်ခုမော်ဒယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးဆောင်Carlezon နှင့်ပညာရှိ, 1996).
အခြားအ pharmacological သက်သေအထောက်အထားများကိုဤသီအိုရီကိုထောကျပံ့များနှင့်ကယ်လစီယမ် (Ca2 +) နှင့်၎င်း၏ဒုတိယတမန်လုပ်ဆောင်ချက်များကို implicates ။ activated NMDA တံခါးဝ Ca2 + (ကိုတွေ့မြင်မြှေးပါး depolarization, neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်, signal ကို transduction နှင့်မျိုးဗီဇစည်းမျဉ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုတစ်ဦး intracellular အချက်ပြမော်လီကျူး receptors Carlezon နှင့် Nestler, 2002; Carlezon et al ။ , 2005) ။ တိုက်ရိုက် NAc သို့ L-type ကို Ca2 + ရန် diltiazem ၏ Microinjection (ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးပွားစေChartoff et al ။ , 2006) ။ Ca2 + ရောက်လာအတွက် diltiazem-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲဆုလာဘ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သောယန္တယားကိုမသိရှိပါ။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေဗို့-operated L-type ကိုလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် Ca2 + ရောက်လာ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဟာ ventral NAc (အတွင်းအာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းလျော့နည်းစေကြောင်းCooper ကများနှင့်ဖြူ, 2000) ။ ဒါဟာသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်, သို့သော်, တစ်ဦးတည်းကြောင့် diltiazem ကအနည်းဆုံးဒီလေ့လာမှုတွေအတွက်စမ်းသပ်ပြီးအဆိုပါဆေးများမှာအကြိုးမပေးခဲ့သညျ။ ဒါက NAc အတွင်း L-type ကိုလမ်းကြောင်းများမှတဆင့် Ca2 + ရောက်လာ၏အခြေခံအဆင့်ဆင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အနိမ့်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခက်ခဲထပ်မံလျှော့ချရန်ကြောင်းညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်ခြေ diltiazem ၏ microinjection အဆိုပါ NAc, unmasking ဆုလာဘ်အတွင်းကမကထပြုခဲ့ကြသည်ကိုကင်းများ၏ဆန္ဒရှိလုပ်ရပ်များလျော့ကျစေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, NAc အတွင်းကူးယူအချက်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်များ၏လှုပ်ရှားမှု binding ပရိုတိန်း (CREB) (ဆန္ဒရှိပြည်နယ်နှင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်အတွက်လျှော့ချနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Pliakas et al ။ , 2001; Nestler နှင့် Carlezon, 2006) ။ CREB ၏ activation L-type ကို Ca2 ၏ activation + လိုင်းများ (မှတဆင့်ပေါ်ပေါက်နိုင်သည့် phosphorylation ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်Rajadhyaksha et al ။ , 1999) ။ Phosphorylated CREB (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့သည် NAc အတွက်κ-opioid receptors ၏ activation မှတဆင့်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များမှအထောက်အကူဖြစ်စေအံ့သောငှါတစ် neuropeptide dynorphin ၏စကားရပ်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ် Carlezon et al ။ , 2005) ။ ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များကိုထိန်းညှိအတွက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc Ca2 + ၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော သာ. ကြီးမြတ်အသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုတစ်ဘုံဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors ချို့တဲ့ကြွက် (ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုလျှော့ချကြပါပြီWelter et al ။ , 2007) ။ D2 ကဲ့သို့ receptors ၏ Ablation လည်း (မော်ဖင်းအကိုက်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေMaldonado et al ။ , 1997) -presumably VTA ယန္တရားများမှတဆင့် dopamine လှုံ့ဆော်ဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စွမ်းရည်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်: Leone et al ။ , 1991; ဂျွန်ဆင်နှင့်မြောက်, 1992) (နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဦးနှောက်ဆွကတညျးအဲလ် et al ။ , 2005) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာအနက်အဆိုပါ NAc အတွက် D2 ကဲ့သို့ receptors ၏ဆုံးရှုံးမှုဟာသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းတားစီးဖို့ dopamine များ၏စွမ်းရည်, ဆုလာဘ်တစ်ခု putative ယန္တရားလျော့နည်းစေသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, လူ့စွဲဟာ NAc အတွက် binding dopamine D2 တူသောအဲဒီ receptor လျှော့ချပြီသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါ, (ဒီအဲဒီ receptor encoding ကဆုလာဘ်တစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုVolkow et al ။ , 2007).
မော်လီကျူးဇီဝဗေဒအခြားတိုးတက်လာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်သူတို့၏အရေးပါမှုကိုဆန်းစစ်ဖို့ discrete ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်ထိုကဲ့သို့အပြောင်းအလဲများတူတဲ့နိုင်စွမ်း၏မူးယစ်ဆေးမှ neuroadaptative တုံ့ပြန်မှုများ၏ထောက်လှမ်း enabled ပါပြီ။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုဦးနှောက်ထဲမှာနေရာအနှံ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့်အဲဒီ receptor subunits GluR1-4 (အမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာထားတဲ့ AMPA-type အမျိုးအစားအချိုမှု receptors ၏စကားရပ်၌တည်ရှိ၏Hollmann et al ။ , 1991; Malinow နှင့် Malenka, 2002) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး NAc အတွက် GluR စကားရပ်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့မှု (ထို NAc အတွက် GluR1 စကားရပ် elevatesChurchill ၏ et al ။ , 1999) ။ ထို့အပွငျ GluR2 စကားရပ်ΔFosBဖော်ပြအင်ဂျင်နီယာကြွက်များ၏ NAc, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတိုးမြှင် sensitivity ကိုချိတ်ဆက်နေတဲ့ neuroadaptation (အတွင်းသို့ခြီးမွှောကျနေသည်Kelz et al ။ , 1999) ။ ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်သည့် NAc အတွက်ရွေးချယ် GluR1 ခြီးမွှောရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည့်အတွက်လေ့လာမှုများ NAc အတွက်မြင့်မားသော GluR2 (ကိုကင်းဆုလာဘ်တိုးပွါးသော်လည်းဒီ neuroadaptation, နေရာအေးစက်စမ်းသပ်မှုအတွက်ကင်းဆန္ဒရှိစေရန်လေ့ကြောင်းညွှန်ပြKelz et al ။ , 1999) ။ တွေ့ရှိချက်များ၏ဤပုံစံများအတွက်အလားအလာရှင်းလင်းချက်ဖွယ်ရှိ Ca2 + နှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုနဲ့ intracellular အချက်ပြအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုပါဝငျသညျ။ -permeable Ca1 + နေသော AMPARs, (Hollman et al GluR1 စကားရပ် GluR1-homomeric (သို့မဟုတ် GluR3-GluR2 heteromeric) ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှာတိုးတက် 1991 ။ Malinow နှင့် Malenka, 2002) ။ ဆနျ့ကငျြ, GluR2 Ca2 + ရောက်လာကာကွယ်ပေးသည်တဲ့ motif ပါရှိသည်; GluR2 ၏အရှင်တိုးလာစကားရပ် GluR2 ပါဝင်သော Ca2 + -impermeable AMPARs ဖွဲ့စည်းခြင်းမျက်နှာသာ (နှင့်သီအိုရီအ Ca2 + -permeable AMPARs ၏နံပါတ်လျော့ချ) ပေသည်။ ထို့ကြောင့် GluR2 ပါဝင်သော AMPARs (အထူးသဖြင့် Ca2 + ဖြင့်၎င်းတို့၏ interaction ကမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, ဒီ subunit ချို့တဲ့သူတွေကိုမှသူတို့ကို function ကွဲပြားဆပ်ကြောင်းဇီဝကမ္မဂုဏ်သတ္တိများရှိသဖန်းသီး။ 1).
သိထား AMPA ၏ subunit ဖွဲ့စည်းမှု (အချိုမှု) receptors သရုပ်ဖော်။ ရိုးရှင်းဘို့, receptors2subunits နှင့်အတူဖော်ပြပါရှိသည်။ GluR2 အဲဒီ receptor မှတဆင့်တစ်ဦး motif ကြောင်းလုပ်ကွက် Ca2 + flux ပါရှိသည်နှင့်အနည်းဆုံးဆံ့ကြောင်း, အရှင် heteromeric receptors ...
ဤရွေ့ကားအစောပိုင်းလေ့လာမှုများယေဘုယျအားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုလိုအပ်နှင့်ယူဆရဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက် (ရုပ်သိမ်းရေး) ၏သံသရာပါဝင်ပတ်သက်နေသည့်အရပ်ဌာနအေးစက်လေ့လာမှုများ, ပါဝင်ပတ်သက်။ လတ်တလောလေ့လာမှုတွေ (GluR စကားရပ်မြားတှငျပွောငျးလဲထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုမှတဆင့်ဝယ်ယူသူတွေကို intracranial Self-stimulation (ICSS) ကိုထိခိုက်ခြင်း, စစ်ကူ (ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်) ၏ပြင်းအားအတိအကျထိန်းချုပ်သောအတွင်းအော်ပရေတာလုပ်ငန်းတာဝန်မော်ဒယ်ကိုဘယ်လိုလေ့လာပညာရှိ 1996) ။ မြင့်မားသော GluR1 သူတို့ကိုလျော့ကျသော်လည်း NAc shell ကိုအတွက် GluR2 ၏ elevated စကားရပ် (ICSS တံခါးခုံတိုးပွါးTodtenkopf et al ။ , 2006) ။ ICSS အပေါ် GluR2 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းမှသှေးဆင်တူသည်ပညာရှိ 1996), ကဆွ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအတွက်တိုးမြှင့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြု။ ဆနျ့ကငျြ, GluR1 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ (Markou et al ။ , 1992) နှင့်κ-opioid အဲဒီ receptor agonists (အပါအဝင် prodepressive ကုသမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းမှသှေးဆင်တူသည်Pfeiffer et al ။ , 1986; Wadenberg, 2003; Todtenkopf et al ။ , 2004; Carlezon et al ။ , 2006), ကဆွ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းထင်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြု။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် NAc shell ကိုအတွက် GluR1 နှင့် GluR2 ၏မြင့်မားသောစကားရပ်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအပေါ်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးဆက်များရှိသည်ဖော်ပြသည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် NAc shell ကိုအတွက် GluR1 နှင့် GluR2 စကားရပ်ခြီးမွှောကျကြောင်းယခင်လေ့လာတွေ့ရှိချက် (ကိုကင်းရာအရပ်ကိုအေးစက်လေ့လာမှုများအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိအတည်ပြုKelz et al ။ , 1999), နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအပြုအမူတွေဤသက်ရောက်မှုများယေဘုယျတိုးချဲ့။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူတို့လျှော့ချဆုလာဘ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောခြင်းကိုမနှစ်သက်အတွက် NAc အတွင်း Ca2 + flux ဆက်စပ်. အဖို့ပိုပြီးသက်သေအထောက်အထားသည်။ Ca2 + အာရုံခံ depolarization နှင့်မျိုးဗီဇစည်းမျဉ်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အခန်းကဏ္ဍသောကြောင့်, NAc shell ကိုအတွက် GluR စကားရပ်နှင့် AMPAR subunit ဖွဲ့စည်းမှုမြားတှငျပွောငျးလဲဖွယ်ရှိယူဆရလှုံ့ဆျောမှုပြောင်းလဲပစ်ရန်အပြန်အလှန်သောဇီဝကမ္မနှင့်မော်လီကျူးတုံ့ပြန်မှုတစ်ရပ်ကိုစတင်ပါ။ တနည်းကား, Ca2 + signal ကို transduction ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များပါဝင်ပတ်သက်ဗီဇဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, အရာအားဖြင့်ယန္တယားကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
C. Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား
electrophysiological စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအများအပြားလိုင်းများ NAc ပစ်ခတ်ရန်အတွက်လျော့နည်းသောစိတ်ကူးဆုချနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါထောက်ခံပါတယ်။ ပထမဦးစွာအကြိုးလှုံ့ဆော်မှု NAc ပြုခဲ့ထုတ်လုပ်ရန် Vivo အတွက်။ ဒုတိယအချက်မှာအထူးသ NAc ပစ်ခတ်ရန်၏တားစီးမြှင့်တင်ရန်ကြောင်း neurobiological ထိန်းသိမ်းရေးလှုံ့ဆော်မှု၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ တတိယအချက် NAc GABAergic MSNs ၏တားစီးထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုများ၏ hedonic အရည်အသွေးတွေနှင့်ပတ်သက်သောအချက်ပြထုတ်လုပ်ရန်ဖို့ ventral pallidum အဖြစ်မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦများ disinhibit နိုင်ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ဤလိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအလှည့်အတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ဆုံးသိသိသာသာလိုင်းမူးယစ်ဆေးနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုအပ်ထားရာကြွက် Paradigm အတွက် NAc Single-ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု၏လေ့လာမှုများပါဝငျသညျ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးကတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်ပစ်ခတ်ရန်မော်ဂျူ၏အများဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိပုံစံတစ်ခုယာယီတားစီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုကင်းအပါအဝင်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ Self-အုပ်ချုပ်ရေး (စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်လူမျိုးနှင့်အနောက်, 1996), ဘိန်းဖြူ (Chang et al ။ , 1997), အီသနော (Janak et al ။ , 1999), sucrose (Nicola et al ။ , 2004), အစားအစာ (Carelli et al ။ , 2000) နှင့် medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး (ရူ့ et al ။ , 2005) ၏လျှပ်စစ်ဆွ။ အဖြစ်လေ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေး Paradigm အဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမဟုတ်သော်လည်း, ထိုတားစီး-ဆုလာဘ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းဆုလာဘ်တစ်ခုအော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှု (များအတွက်လိုအပ်ချက်မရှိဘဲကယ်နှုတ်တော်မူ၏ရှိရာနိုး, ပြုမူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်Roitman et al ။ , 2005; ဝီ et al ။ , 2008) ။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများယာယီပြုခဲ့တိုက်ရိုက်မော်တာကို output related ခံရပေမယ့်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသို့မဟုတ် motivationally activated ပြည်နယ်မှချည်ထားသောစေခြင်းငှါမလိုကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဖြစ်နိုင်ရန် NAc တားစီး-ဆုလာဘ်ကြားဆက်ဆံရေးကဲ့သို့နေရာအနှံ့ပုံရသည်, သို့သော်, counterexamples ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Taha နှင့် Fields (2005) တစ်ဦး sucrose ဖြေရှင်းချက်-သောက်သုံးခွဲခြားဆက်ဆံမှု task ထဲမှာအာခေါင်ဝှက်ထငျရှားသောသူတို့ကို NAc အာရုံခံ၏တွေ့စိတ်လှုပ်ရှားပြုခဲ့ရှီယာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအာရုံခံ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်က (~ အားလုံးအာရုံခံ၏ 10% မှတျတမျးတငျထား) သေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုံမှန် NAc လှုပ်ရှားမှုပုံစံဖြစ်ပေါ်လာသောအဘယ်အရာကိုမှဤကွာဟမှုနည်းစနစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဆဲလ်များ၏ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးဖွဲ့စည်းမှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ Vivo အတွက်။ ဒီလိုနည်းပညာရရှိနိုင်ဖြစ်လာသကဲ့သို့, NAc အာရုံခံ၏ထူးခြားသောအလုပ်လုပ်တဲ့ subclasses အများဆုံးဖွယ်ရှိဖော်ထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး NAc function ကိုတစ်ဦးပိုမိုအသေးစိတ်မော်ဒယ်ဆောက်လုပ်ထားနိုင်ပါသည်။
ဘယ်လို NAc ပစ်ခတ်ရန်၏ယာယီဆုလာဘ်-related ပြုခဲ့ထုတ်ပေးနေကြသနည်း ကြိုးလှုံ့ဆော်မှု extracelluar dopamine အတွက်ယာယီမြင့်တက်ထုတ်လုပ်ရန်လူသိများကြသည်သောကြောင့်, တဦးတည်းရိုးရှင်းတဲ့အယူအဆ dopamine တာဝန်ရှိဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကနေအမှန်မှာ, တွေ့ရှိချက်များ စသည်တို့အတွက် နှင့် Vivo အတွက် iontophoretic လျှောက်လွှာများနှင့်အခြားနည်းလမ်းများ အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ dopamine Nicola et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် (ပစ်ခတ် NAc ဟန့်တားနိုင်စွမ်းကြောင်းညွှန်ပြ။ , 2000, 2004) ။ တစ်ဦး ICSS ပါရာဒိုင်းအတွက်တစ်ပြိုင်နက် dopamine လြှပျစစျနှင့်တစ်ခုတည်းယူနစ်တုံ့ပြန်မှု (ပြုခဲ့သောအများစု) ကိုဆန်းစစ်မကြာမီကလေ့လာမှုများကဤ parameters တွေကိုပု NAc shell ကိုအတွက်မာတိကာ၏မြင့်မားသောဘွဲ့ပြသသောညွှန်ပြ (ရူ့ et al ။ , 2007) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, က dopamine excitatory သက်ရောက်မှုအဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များ (Nicola et al ပြုမူအတွက် inhibitory သက်ရောက်မှုမှတ်သားကြပါပြီနိုငျကွောငျးယခုရှင်းပါတယ်။ , 2000, 2004) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, NAc လုပ်ကွက်အတွက် cue-သွေးဆောင်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ပြုခဲ့နှစ်ဦးစလုံးအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ဖို့ VTA inactivating စဉ်ကဆုလာဘ်-related ပြုခဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့မထိခိုက်ပါဘူး (yun et al ။ , 2004a) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏ပေါင်းစပ် dopamine ဆုချ-ဆက်စပ်ဖို့ NAc ပစ်ခတ်ရန်၏တားစီးအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်စဉ်အဖြစ်ကောင်းစွာကြောင့်ကားမောင်းလို့ရပါတယ်အခြားအချက်များရှိရပါမည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သည်အခြားအလားအလာမျှဝေသူများစွာလျော့နည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတှေရှိခဲ့တခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း acetylcholine များလွှတ်ပေးရေးနှင့်ကြိုးအခြေအနေများ (Trujillo et al အောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်ပြပြီနှစ်ဦးစလုံး၏ NAc အတွက်μ-opioid receptors ၏ activation ပါဝင်သည်, 1988 ။ အနောက် et al, 1989 ။ မာကု et al ။ , 1992; Imperato et al ။ , 1992; Guix et al ။ , 1992; Bodnak et al, 1995 ။ ကယ်လီ et al ။ , 1996) နှင့်ပစ်ခတ် NAc (တားစီးနိုင်စွမ်းရှိနှစ်ဦးစလုံး၏ဆက်မက်ကာသီ et al ။ , 1977; Hakan et al ။ , 1989; က de Rover et al ။ , 2002).
ယင်းတားစီး / ဆုလာဘ်အယူအဆထောက်ပံ့ electrophysiological အထောက်အထားနောက်ထပ်အသစ်များလိုင်းမော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇချဉ်းကပ် NAc အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂုဏ်သတ္တိများ manipulate ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည့်အတွက်စမ်းသပ်ချက်ကနေလာပါတယ်။ ယခုအထိဒီအရှင်းလင်းဥပမာ mCREB (လွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ CREB), အ NAc အတွက် CREB လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု repressor ၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression အဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါ NAc တှငျမှတျတမျးတငျထားသအာရုံခံပေးထားသော depolarizing လက်ရှိဆေးထိုး (တုန့်ပြန်နည်းပါးလာ spikes ပြဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်ဤကုသမှုကိုမကြာသေးမီက, NAc MSNs ၏အခ်ါစိတ်လှုပ်ရှားအတွက်လျှောက်လျော့နည်းစေပြခဲ့ပါတယ်dong et al ။ , 2006) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း NAc mCREB overexpression (ကိုကင်းများတိုးမြှင်ကြိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်မသာCarlezon et al ။ , 1998) ဒါပေမယ့်လည်းအတင်းအကျပ်-ရေကူးတာဝန်အတွက်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူသက်ရောက်မှု (တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူPliakas et al ။ , 2001) နှင့်တစ်ဦးသင်ယူ-အကူအညီမဲ့ပါရာဒိုင်း (နယူတန် et al ။ , 2002) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏ပေါင်းစပ် NAc အာရုံခံအတွက်အနိမ့်ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများတစ်ဦးအကူးအပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းအခြေအနေများလည်းဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များလွယ်ကူချောမွေ့နှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ဓါတ်များ elevates သောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အထူး NAc core ကိုဒေသအတွက် Cdk5 ဗီဇ၏ဖျက်မှု (အနေနဲ့တိုးမြှင့်ကင်းဆုလာဘ် phenotype ထုတ်လုပ်Benavides et al ။ , 2007) ။ ဤသည် phenotype တစ်ဦးနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်း တိုးမြှင့်လာသည် NAc MSNs အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ ဤသည် (အစားအဓိကထက် CREB function ကို shell ကိုဒေသတွင်း၌ inhibited အခါအများဆုံးကြံ့ခိုင်ခဲ့သည့် mCREB အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ခြားနားCarlezon et al ။ , 1998) ။ သည်အခြားသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစား, ဤလေ့လာမှုများရှိရာကမပြုစေခြင်းငှါ, အဓိကဒေသနှိုင်းယှဉ်, ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ပေါ်လာသောအရာ, shell ကိုဒေသတွင်း၌ NAc လှုပ်ရှားမှု၏တားစီးအကြားကွဲပြားခြားနားသွား၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆုလာဘ်မှ NAc တားစီးစပ်လျဉ်းအယူအဆအာရုံကြော NAc ပစ်မှတ်အဆောက်အဦများအတွက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆုလာဘ်များအကြားဆက်ဆံရေး၏လေ့လာမှုကထောက်ခံသည်။ NAc MSNs GABAergic projection အာရုံခံဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားအဲဒီဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ပစ်ခတ်၏တားစီးပစ်မှတ်ဒေသများ disinhibit သငျ့သညျ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, NAc shell ကိုနေသိပ်သည်းအနာဂတ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံတဖွဲ့စည်းပုံမှာအဆိုပါ ventral pallidum ဖြစ်ပါတယ်။ ကြော့ electrophysiological လေ့လာမှုများ (ventral pallidal အာရုံခံအတွက်မြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှုတစ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ hedonic သက်ရောက်မှုဝှက်နိုင်သောသရုပ်ပြပါပြီTindell et al ။ , 2004, 2006) ။ ဥပမာအားဖြင့်, (စုစုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောယူနစ်များ 30-40% ကြား) sucrose ဆုလာဘ်မှတုန့်ပြန်ကြောင်းအာရုံခံအကြားတစ်ဦး sucrose ဆုလာဘ်များလက်ခံရရှိမှုလေ့ကျင့်ရေးတလျှောက်လုံးတည်မြဲမှုကြောင့်ပစ်ခတ်ရန်-တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု (တစ်အားကောင်းတဲ့, ယာယီတိုးထုတ်လုပ်Tindell et al ။ , 2004) ။ တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုမှာစုံစမ်းစစ်ဆေး (pallidal အာရုံခံအတွက်လှုပ်ရှားမှုကဤပြောင်းလဲမှုကိုခြေရာခံမယ်လို့ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့အရသာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ hedonic တန်ဖိုးကို manipulate တစ်လိမ္မာပါးနပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုTindell et al ။ , 2006) ။ hypertonic ဆားဖြေရှင်းချက်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆန္ဒရှိအရသာလှုံ့ဆော်မှုများမှာပေမယ့်, ဆား-ဆုံးရှုံးသောလူသားမြားသို့မဟုတ်စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များမှာသူတို့ရဲ့အာခေါင်တိုးလာနေပါတယ်။ အပြုသဘော hedonic တုံ့ပြန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာမျက်နှာအရသာ reactivity ကိုအစီအမံ) ၏အမူအကျင့်အစီအမံနှစ်ဦးစလုံးနှင့် pallidal အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်အတွက်တိုးဆိုဒီယမ်-ဆုံးရှုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် hypertonic ဆားအရသာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပုံမှန်အစားအစာအပေါ်ထိန်းသိမ်းဘူး။ ထို့ကြောင့် pallidal အာရုံခံ, NAc efferents ၏မြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်၏တိုးလာပစ်ခတ်ရန်, ဆုလာဘ်တစ်ခုသော့ချက်အင်္ဂါရပ်ဝှက်ရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အာရုံခံ pallidal အခြားသွင်းအားစုကဤဆုလာဘ်-related ပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများအမူအကျင့်တစ်ခု hedonic နှိုးဆွဖို့တုန့်ပြန်နှင့်၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်တိုးကိုမောင်းဖို့ NAc shell ကို၏ discrete ဒေသများတွင် mu-opioid အဲဒီ receptor activation (MSN ကိုပစ်ခတ်ရန်တားစီးဖို့လူသိများသောအချက်တစ်ခု) ၏စွမ်းရည်များအကြားတစ်ဦးခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးညွှန်ပြခဲ့ကြ (ventral pallidum ၏ discrete ဒေသများတွင်က c-fos ကိုသက်ဝင်Smith က et al ။ , 2007) ။ NAc နှင့် pallidal "hedonic ဟော့စပေါ့" အကြားဒီအပုံတင်းကျပ်စွာနားချင်းဆက်မှီရုံစူးစမ်းခံရဖို့စတင်ကြောင်းတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အသစ်ကဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။
IV ။ ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များအတွက် NAc ၏အခန်းက္ပ
အဆိုပါ NAc ကိုလည်းခြင်းကိုမနှစ်သက်အတွက်အခန်းကဏ္ဍဆိုတဲ့အချက်ကိုတစ်ခါတစ်ရံ underappreciated ဖြစ်ပါတယ်။ Pharmacological ကုသ NAc ထိန်းသိမ်းရေးပြီးနောက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်သရုပ်ပြဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မော်လီကျူးချဉ်းကပ်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ခြင်း (anhedonia အပါအဝင် dysphoria) ဆိုင်းဘုတ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်သောဘုံ neuroadaptions ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသရုပ်ပြကြစိတ်ကျရောဂါနာမကျန်းသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့် (Nestler နှင့် Carlezon, 2006), အရာကိုမကြာခဏစွဲနှင့်အတူပူးတွဲနေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် dysregulated လှုံ့ဆျောမှုပါဝငျသညျ။
NAc ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များအတွက်အခန်းကဏ္ဍသောအစောဆုံးအထောက်အထားအချို့က opioid အဲဒီ receptor ရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေကနေရောက်လာတယ်။ opiate-မှီခိုကြွက်များ၏ NAc သို့ကျယ်ပြန့်-spectrum ကို opioid အဲဒီ receptor ရန် (methylnaloxonium) ၏ Microinjections (conditional ရာအရပျဆန္ဒရှိတည်စေStinus et al ။ , 1990) ။ opiate-မှီခိုကြွက်များတွင်ငွေထုတ်ခြင်း (NAc အတွက်ချက်ချင်း-အစောပိုင်းမျိုးဗီဇများနှင့်ကူးယူအချက်များသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ် precipitatedGracy et al ။ , 2001; Chartoff et al ။ , 2006), MSNs ၏ activation အကြံပြုခြင်း။ အဆိုပါ endogenous κ-opioid ligand dynorphin ၏သက်ရောက်မှုတူတဲ့အရာရွေးချယ်κ-opioid agonists, ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များလည်းထုတ်လုပ်ရန်။ အဆိုပါ NAc အကြောင်းမရှိသို့κ-opioid agonist ၏ Microinjections အေးစက်သောအရပ်ဆန္ဒရှိ (Bals-Kubik et al ။ , 1993) နှင့် ICSS တံခါးခြီးမွှော (ချန် et al ။ , 2008) ။ Inhibitory (G မှာi-coupled) κ-opioid receptors (ထို NAc မှ VTA dopamine သွင်းအားစုများ၏ဆိပ်ကမ်းပေါ်ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုနေကြSvingos et al ။ , 1999), သူတို့ကဒေသခံ dopamine လွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိရှိရာ။ ကဲ့သို့သောသူတို့μ-နှင့်δ-opioid receptors (ရန် apposition အတွက်မကြာခဏများမှာMansour et al ။ , 1995) နှင့်ဆွအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုတွင်ဤ othr receptors မှာ agonists ၏ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အမှန်စင်စစ် dopamine ၏ extracellular ပြင်းအား (စနစ်တကျအားဖြင့် NAc အတွက်လျှော့ချနေကြသည်DiChiara နှင့် Imperato, 1988; Carlezon et al ။ , 2006) သို့မဟုတ်κ-opioid agonist (Donzati et al, 1992 ၏ဒေသခံ microinfusions ။ Spanagel et al ။ , 1992) ။ midbrain dopamine စနစ်များလျော့နည်းသွား function ကို (ကြွက်များတွင် anhedonia အပါအဝင်စိတ်ကျရောဂါပြည်နယ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ပညာရှိ 1982) နှင့်လူသားတွေအတွက် dysphoria (Mizrahi et al ။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်မှတဦးတည်းလမ်းကြောင်းကိုအကျိုးသည်အရေးပါပုံပေါ်ကြောင်း inhibitory dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors ၏ဆွလျှော့ချမည်ဟုသော NAc, (သို့လျှော့ချ dopamine input ကိုဖြစ်ပေါ်လာသောCarlezon နှင့်ပညာရှိ, 1996).
တခြားလေ့လာမှုဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုကိုနှိမ်နှင်းရာတွင် dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုအတည်ပြုပေးရန်ပေါ်လာပါသည်။ opiate-မှီခိုကြွက်များ၏ NAc သို့ dopamine D2 တူသောရန်၏ Microinjections somatic opiate ဆုတ်ခွာလက္ခဏာခပြွီး (Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 1994) ။ အဆိုပါစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုကဒီလေ့လာမှုမှာတိုင်းတာမခံခဲ့ရသော်လည်း, opiate ဆုတ်ခွာ precipitate ကြောင်းကုသမှုမကြာခဏ (သူတို့ဆုတ်ခွာ၏ somatic ဆိုင်းဘုတ်များဖြစ်ပေါ်စေခြင်းထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များစေGracy et al ။ , 2001; Chartoff et al ။ , 2006) ။ စိတ်ဝင်စားစရာသို့သော် NAc သို့ dopamine D1 ကဲ့သို့ agonist ၏ microinjections လည်း opiate-မှီခိုကြွက်များတွင်ငွေထုတ်၏ somatic ဆိုင်းဘုတ်များထုတ်လုပ်ရန်။ အဆိုပါဒေတာခြင်းကိုမနှစ်သက်ရန်နောက်ထပ်လမ်း NAc အတွက် opiate-မှီခိုသွေးဆောင် neuroadaptations နှင့်အတူကြွက်များတွင် excitatory dopamine D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ဆွတိုးပွားလာကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, opiate မှီခိုကြွက်များတွင် D1 တူသောအဲဒီ receptor ဆွများထဲမှအကျိုးဆက် GluR1 ၏ phosphorylation မ (Chartoff et al ။ , 2006), အရာတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း၏ MSNs အပေါ် AMPA receptors ၏တိုးမြှင့်မျက်နှာပြင်စကားရပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှု (Turgeon et al ။ , 1997) နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု (Pliakas et al ။ , 2001) ကို NAc အတွက်ကူးယူအချက် CREB ကိုသက်ဝင်။ အဆိုပါ NAc အတွက် CREB function ကို၏ viral vector-သွေးဆောင်မြင့် (မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေCarlezon et al ။ , 1998) နှင့် hypothalamic ဦးနှောက်ဆွ (Parsegian et al ။ , 2006), anhedonia ကဲ့သို့သက်ရောက်မှုကိုညွှန်း။ ဒါဟာအစဆန္ဒရှိကင်း (dysphoria တစ် putative နိမိတ်လက္ခဏာ) ၏အနိမ့်ဆေးများစေသည်, နှင့်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှု ( "အပြုအမူစိတ်ပျက်လက်ပျက်" ၏တစ်ဦး putative နိမိတ်လက္ခဏာ) (ထဲမှာ immobility အပြုအမူတိုးပွါးPliakas et al ။ , 2001) ။ ဤအဆိုးကျိုးများအတော်များများဟာ (dynorphin function ကိုအတွက် CREB-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တိုးမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်Carlezon et al ။ , 1998) ။ အမှန်စင်စစ်κ-opioid အဲဒီ receptor-ရွေးချယ် agonists (ဆုလာဘ်မော်ဒယ်များအတွက် anhedonia နှင့် dysphoria လက္ခဏာကိုထုတ်လုပ်သည့် NAc အတွက်မြင့်မားသော CREB function ကိုထုတ်လုပ်သူတို့အားသှေးအလားတူဖြစ်ကြောင်းသက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက် immobility တိုးလာBals-Kubik et al ။ , 1993; Carlezon et al ။ , 1998; Pliakas et al ။ , 2001; Mague et al ။ , 2003; Carlezon et al ။ , 2006) ။ ဆနျ့ကငျြ, κ-ရွေးချယ်ရန်အတွက် NAc (များတွင်နှောင့်အယှက် CREB function ကိုအတူတိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်ကြောင်းပုံနဲ့တူတဲ့လက္ခဏာတူသော phenotype ထုတ်လုပ်ရန်Pliakas et al ။ , 2001; နယူတန် et al ။ , 2002; Mague et al ။ , 2003) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် NAc အတွင်း CREB ၏ drug- သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် activation များထဲမှဇီဝအရေးကြီးသောအကျိုးဆက်စိတ်ကျရောဂါ၏သော့ချက်ဆိုင်းဘုတ်များကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းအရာ dynorphin ၏ကူးယူ, တိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့အဖြစ် Dynorphin သက်ရောက်မှုဖွယ်ရှိ, အားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုကို VTA အာရုံခံလျှော့ချ, mesolimbic dopamine အာရုံခံထံမှ neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်တားစီးဖို့ပြုမူကြောင်းκ-opioid receptors ၏ဆွကနေတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ ခြင်းကိုမနှစ်သက်ရန်ဤလမ်းကြောင်းကိုအကျိုးသည်အရေးပါပုံပေါ်ကြောင်း inhibitory dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors (များ၏ဆွအတွက်လျှော့ချထုတ်လုပ်ရန်မယ်လို့ရသော NAc မှ dopamine input ကို, လျှော့ချခံရဖို့ပုံပေါ်Carlezon နှင့်ပညာရှိ, 1996) ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့, NAc အတွက် CREB ၏မြင့်မားသောစကားရပ်ကိုတိုက်ရိုက် (MSNs ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးပွါးကြောင်းအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်dong et al ။ , 2006) မျိုးစုံသက်ရောက်မှုများဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုအထောက်အကူပြုသောဖြစ်နိုင်ခြေပြုစုပျိုးထောင် D2-regluated တားစီး၏ဆုံးရှုံးမှုများအပြင်၌။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့သည့် NAc အတွက် GluR1 စကားရပ်ခြီးမွှောနိုင်ပါတယ် (Churchill ၏ et al ။ , 1999) ။ အဆိုပါ NAc အတွက်မြင့်မားသော GluR1 ၏ viral vector-သွေးဆောင်မြင့်သောအရပ်အေးစက်လေ့လာမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေးခြင်းကိုမနှစ်သက်တိုးပွါး, မူးယစ်ဆေးအကဲဆတ်ခြင်းတစ်ခု "atypical" type ကို (ဆိုလိုသည်မှာ, အစားကင်း၏အကြိုးရှုထောင့်ထက်ဆန္ဒရှိမှ sensitivity ကိုကြီးထွား) ။ ဒီကုသမှုကိုလည်း (ICSS တံခါးခုံတိုးပွါးTodtenkopf et al ။ , 2006), anhedonia တူသောနှင့် dysphoria ကဲ့သို့သက်ရောက်မှုကိုညွှန်း။ စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများ NAc အတွက်မြင့်မားသော CREB function ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သူတို့အားနီးပါးတူညီကြသည်။ ဤရွေ့ကားတူညီနှစ်ဦးစလုံးသက်ရောက်မှုအတူတူပင်ပိုကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှဇာတ်လမ်းများတွင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ဆိုဒီယမ်မြားတှငျပွောငျးလဲမှဦးဆောင် Ca1 + Ca2 + ရောက်လာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် CREB ကိုသက်ဝင်လို -permeable AMPA receptors ၏မျက်နှာပြင်စကားရပ်များတွင်ဒေသခံတိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့ရသော NAc အတွက် GluR2 ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, အခြေခံအကျိုးသက်ရောက်စေနှင့် NAc အတွက် MSNs ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နှိုးဆွထိုချန်နယ်စကားရပ် (Carlezon နှင့် Nestler, 2002; Carlezon et al ။ , 2005; dong et al ။ , 2006) ။ တနည်းအား CREB function ကိုစောစောအပြောင်းအလဲများကို GluR1 စကားရပ်မြားတှငျပွောငျးလဲအရင်အဦးနေရာပေလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားဆက်ဆံရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပါအဝင်အများအပြား NIDA-ရန်ပုံငွေဓါတ်ခွဲခန်းအတွက်အထူးကြပ်မတ်လေ့လာမှုအောက်တွင်လက်ရှိဖြစ်ကြသည်။
NAc အာရုံခံ၏ကျယ်ပြန့်စိတ်လှုပ်ရှားဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက် encodes သောအယူအဆ၏နည်းနည်း electrophysiological စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှိခဲ့သည်သော်လည်းမရရှိနိုင်ပါဒေတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်သူများ mirror ။ ပထမဦးစွာဆန္ဒရှိအရသာလှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု. နှစ်ခုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများသုံးကြိမ်အဖြစ်အများအပြား NAc အာရုံခံ (ပြုခဲ့အဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်လှုပ်ရှားအတူလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ကြောင်းညွှန်ပြနှစ်ဦးစလုံးRoitman et al ။ , 2005; ဝီ et al ။ , 2008) ။ တိုးနှင့်အတူများထက်ပစ်ခတ်ရန်အတွက်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်အတူသုံးကြိမ်ထက်ပိုဆဲလ်: စိတ်ဝင်စားစရာဤတူညီသောလေ့လာမှုများတစ် sucrose သို့မဟုတ် saccharin ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ကြောင်းယူနစ်အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ပရိုဖိုင်းကိုပြသသောရှာပါ။ တစ်ဦးပိုင်းတွင်ဆုချီး saccharin လှုံ့ဆော်မှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူကချိတ်တွဲခြင်းဖြင့်ဆန္ဒရှိခဲ့သည့်အခါများအပြင်, ထိုနှိုးဆွဖို့တုန့်ပြန်ကြောင်း NAc ယူနစ်များ၏မြင်သာထင်သာပစ်ခတ်ရန်ပုံစံ (စိတ်လှုပ်ရှားဖို့တားစီးကနေပြောင်းရွှေ့ဝီ et al ။ , 2008) ။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤ NAc ပစ်ခတ်ရန်တိုးအတွက်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များဝှက်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီ NAc အာရုံခံကသူတို့ရဲ့ပစ်ခတ်ရန်-rate ကိုတုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးအားဖြင့်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ hedonic valence ကိုခြေရာခံနိုင်မစေခြင်းငှါသရုပ်ပြပါဘူးမသာ။
ဒုတိယအချက်မှာ Synaptic နှင့်အခ်ါအမြှေးပါး၏မော်လီကျူးဗီဇထိန်းသိမ်းရေး NAc အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးမြှင့်ကြောင်းဂုဏ်သတ္တိများဆန္ဒရှိဖို့ကြိုးနေတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုရဲ့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု shift နိုင်ပါတယ်။ ပေးထားသော depolarizing လက်ရှိသွေးခုန်နှုန်းတုံ့ပြန် spikes များ၏အရေအတွက်တိုးခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်, NAc အတွက် CREB ၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression (MSNs အတွက်အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်ခုတိုးထုတ်လုပ်dong et al ။ 2006) ။ တိုးမြှင့် NAc စိတ်လှုပ်ရှားဤအခြေအနေများအောက်တွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ် conditional ရာအရပ်ကိုပြ မနှစ်သက်မှု ကိုကင်းဖို့, အစားတိရိစ္ဆာန်များကိုထိန်းချုပ်သောအရပ် preference ကိုတုံ့ပြန်မှုထက် (အတူတူပင်ထိုးပြPliakas et al ။ , 2001) ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် (အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက်တိုးမြှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူပြPliakas et al ။ , 2001) နှင့်အကူအညီမဲ့ပါရာဒိုင်းသင်ယူ (နယူတန် et al ။ , 2002) ။ အလားတူအပြုအမူ phenotype ထုတ်လုပ်အခြားမော်လီကျူးကိုင်တွယ် NAc အတွက် AMPAR subunit GluR1 (များ၏ overexpression ဖြစ်ပါသည်Kelz et al ။ , 1999; Todtenkopf et al ။ , 2006) ။ ကသေး electrophysiological လေ့လာမှုကအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသော်လည်း, ဒီ GluR1 overexpression NAc MSNs အတွက် Synaptic စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်ခုတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒီယေဘုယျအတွက်အမြှေးပါးအတွင်းနောက်ထပ် AMPARs များ၏သွင်းမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် GluR1 ၏ကြွယ်ဝခြင်းသည်အလားအလာပိုကြီးတဲ့ Single-ရုပ်သံလိုင်း conduction ရှိသည်ဖို့လူသိများသည့် GluR1 homomeric receptors, (၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မသာSwanson et al ။ , 1997) နှင့်အရှင်တိုးမြှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ပင်ထပ်မံကူညီသည်။
NAc ပစ်ခတ်ရန်ဆန္ဒရှိအခြေအနေများစဉ်အတွင်းခြီးမွှောကျလျှင်တတိယ, မြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်အဖြစ်ကောင်းစွာဤအခြေအနေများစဉ်အတွင်း MSNs ထံမှဂါဘမြို့သားဖြန့်ချိနေတဆင့်နှိမ်နင်းရပါမည်။ Ventral pallidal ယူနစ်အသံသွင်း (ပုံမှန်ဇီဝကမ္မအခြေအနေများအောက်တွင်ဆန္ဒရှိကြောင်း stimulus hypertonic ဆား-တစ်အရသာ၏ပါးစပ်ပြုတ်ရည်ကိုအောက်ပါအလွန်နိမ့်ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများပြသTindell, 2006) ။ ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူရှင်းလင်းစွာပိုပြီးအလုပ်မဆိုအခိုငျအမာကောက်စေဖို့လိုအပျပေမဲ့, ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာဆန္ဒရှိအခြေအနေများစဉ်အတွင်း NAc အာရုံခံ၏တိုးမြှင်ပစ်ခတ်ရန်မနှစ်မြို့ဖွယ်သဘာဝကုဒ်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် pallidal အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်ဖိနှိပ်ခြင်းအလိုငှါဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ကိုက်ညီများမှာ တစ်နှိုးဆွ၏။
အထက်ဖော်ပြထားတဲ့အထောက်အထားအပေါ်အခြေခံပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်အယူအဆဆန္ဒရှိကုသမှုသည်ဤအာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်သော်လည်းအကြိုးလှုံ့ဆော်မှု, NAc MSNs များ၏လုပ်ဆောင်မှုလျော့ချသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီ model ၏အဆိုအရ (သဖန်းသီး။ 2), NAc အာရုံခံလုပ်သူများဆုလာဘ်-related ဖြစ်စဉ်များတားစီး။ ပုံမှန်အခြေအနေမျိုးမှာ, AMPA နှင့် NMDA receptors သို့မဟုတ် dopamine လုပ်ရပ်များမှာအချိုမှုလုပ်ရပ်များကကမကထပြုခဲ့ excitatory လွှမ်းမိုးမှု D1 တူသောမှာ receptors D2 ကဲ့သို့ receptors မှာ inhibitory dopamine လုပ်ရပ်များအားဖြင့်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းနေကြသည်။ အဆိုပါ NAc-အပါအဝင်ကင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်လို့ကုသမှု (လူမျိုး et al ။ , 2007), မော်ဖင်းအကိုက် (ကြားရှိ et al ။ , 1982), NMDA ရန် (Carlezon et al ။ , 1996), L-type ကို Ca2 + ရန် (Chartoff et al ။ , 2006), အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (ဝီ et al ။ , 2008) နှင့်ကြီးစိုး-အနုတ်လက္ခဏာ CREB ၏စကားရပ် (dong et al ။ , 2006) -have ဆုလာဘ်-related သက်ရောက်မှုသူတို့မြစ်အောက်ပိုင်းဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပေါ် NAc ၏ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျှော့ချလို့ပဲ။ ဆနျ့ကငျြ, glutamatergic သွင်းအားစု (ဥပမာ, GluR1 ၏မြင့်မားသောစကားရပ်ချဲ့အားဖြင့် NAc ကိုသက်ဝင်ကြောင်းကုသမှု; Todtenkopf et al ။ , 2006), ပြောင်းလဲအိုင်းရုပ်သံလိုင်း function ကို (CREB ၏ဥပမာမြင့်မားသောစကားရပ်: dong et al ။ , 2006), (D2 ကဲ့သို့သောဆဲလ်တွေ (ဥပမာκ-opioid အဲဒီ receptor agonists) မှ inhibitory dopamine သွင်းအားစုကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ် inhibitory μ-သို့မဟုတ်δ-opioid receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းအနောက်နိုင်ငံများနှင့်ပညာရှိ, 1988; Weiss, 2004) သူတို့မြစ်အောက်ပိုင်းဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပေါ် NAc ၏ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြှင့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆန္ဒရှိအဖြစ်ကိုရိပ်မိကြပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ထိုကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုကုသမှုထက် ကျော်လွန်. ဆက်လက်ရှိကြောင်း homeostatic (သို့မဟုတ် allostatic) neuroadapations သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ခံစားချက်အတွက်အခြေခံဆိုင်းဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုသို့သောဆိုင်း (စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ရောဂါနာမကျန်း၏ Co-ရောဂါရှင်းပြအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်Kessler et al ။ , 1997): NAc အာရုံခံများ၏လုပ်ဆောင်မှုလျော့ချကြောင်းမူးယစ်ဆေးဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့လှုံ့ဆော်မှုဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု (ဥပမာ, စိတ်ဖိစီးမှုသော်လည်း, () anhedonia သို့မဟုတ် dysphoria ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအခြေအနေများဦးဆောင် abstinence စဉ်အတွင်းစနစ်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဆပ်ကြောင်းအစားထိုး neuroadaptations သွေးဆောင်ခြင်းငှါ) အ NAc ကိုသက်ဝင်ကြောင်း သူတို့ရဲ့အယူခံတိုးမြှင့်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ inhibitory လုပ်ရပ်များမှစနစ်ပိုပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်ဆပ်ကြောင်းအစားထိုး neuroadaptations သွေးဆောင်ခြင်းငှါ, ။ ဒါကအလုပ်လုပ်ကိုင်အယူအဆ ပို. ပို. ခေတ်မီချဉ်းကပ်မှုအမျိုးမျိုးမှတဆင့် testable ဖြစ်ပါတယ်။
နျူကလီးယပ် accumbens (NAc) ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များထိန်းညှိခြင်းငှါမည်သို့ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်လုပ်အယူအဆသရုပ်ဖော်ထားတဲ့သိထား။ (a) NAc အာရုံခံလုပ်သူများဆုလာဘ်-related ဖြစ်စဉ်များတားစီး။ ပုံမှန်အခြေအနေမျိုးမှာ, cortical အကြားချိန်ခွင်လျှာလည်းမရှိ ...
ယင်းတားစီး / ဆုလာဘ်အယူအဆမှတဦးတည်းအတွက်အသိပေးချက် NAc ပစ်ခတ်ရန်၏ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတားစီးဖြစ်ပါသည်, inactivation သို့မဟုတ်တွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများ၌ရှိသကဲ့သို့, အကြိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်ပေါ်လာပါဘူး (ဥပမာ yun et al ။ , 2004b) ။ ဤသည်က NAc ၏တားစီးမဟုတျကွောငျးဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်, နှုန်း se, ဆုလာဘ် encodes ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အကူးအပြောင်း ပုံမှန် Basal ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများအနေဖြင့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုပစ္စုပ္ပန်အခါပေါ်ပေါက်သောအနိမ့်နှုန်းရန်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာတားစီးပုံမှန် NAc ပစ်ခတ်ရန်၏ယာယီစိတ်ကျထဲမှာ encoded သည့်ပြောင်းလဲနေသောသတင်းအချက်အလက်ကျဆင်းစေနိုင်သည်။
ဒီအယူအဆများ၏ခန့်မှန်းချက်များ Electrophysiology-based စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုအခြေခံအမျိုးအစားသို့ကျလိမ့်မည်။ ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားကဒီပြောင်းလဲဆုလာဘ်ပြည်နယ်၏ electrophysiological ဆက်စပ်မှုအဘို့စမ်းသပ်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လှုံ့ဆော်မှုဆုချီးတုံ့ပြန်စဉ်ဆက်မပြတ်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်တိရစ္ဆာန်ရဲ့အမူအကျင့်ပြည်နယ်ကြိုးကိုင်ပါဝငျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, psychostimulants မှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုကနေအစောပိုင်းရုပ်သိမ်းပြည်နယ်ကသဘာဝကြိုးလှုံ့ဆော်မှုမှ anhedonia နှင့်တုန့်ပြန်မရှိခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းတားစီး / ဆုလာဘ်အယူအဆကဒီပြည်နယ်အတွင်းမှာ NAc အာရုံခံ၏ electrophysiological အခြေအနေအကြောင်းအဘယ်အရာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမလဲ အဓိကခန့်မှန်း NAc အာရုံခံပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးကြိုးလှုံ့ဆော်မှု (ဥပမာ sucrose) အားထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်လှုပ်ရှားမှုဖိနှိပ်မှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းပြမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီသေးစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ တားစီးအတွက်ထိုကဲ့သို့သောကျဆင်းခြင်းများအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားယန္တရားများ, ကပေါ်ပေါက်သင့်ပါတယ်အခ်ါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပြောင်းအလဲများမဆိုပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားအတွက်ခြုံငုံတိုး (ဥပမာ Na + သို့မဟုတ် Ca2 + ရေစီးကြောင်းတိုးလာ K + ရေစီးကြောင်းလျော့နည်းသွား) သို့မဟုတ် Synaptic ဂီယာ (ပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ, ဥပမာ glutamatergic အတွက်လျော့ကျသို့မဟုတ် ) GABAergic ဂီယာအတွက်တိုးပွားစေပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အစောပိုင်း psychostimulant ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း NAc MSN ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဒေတာ (ဒါဟာတကယ်တော့ဒီအဆင့်စဉ်အတွင်းလျော့နည်းသွားကြောင်းအကြံပြုZhang က et al ။ , 1998; ဟူ et al ။ , 2004; dong et al ။ , 2006; Kourrich et al ။ , 2007) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြုလုပ်စိတ်လှုပ်ရှားအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာစိတ်ကျရောဂါဖြစ်ကောင်းa"ကိုကြမ်းပြင်" အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးခြင်းနှင့်, ဤပြုခဲ့၏ပြင်းအားကိုလျှော့ချအသုံးပြုပုံယာယီပစ်ခတ်ရန်ပြုခဲ့တွင်ပါရှိသောဆုလာဘ်-related သတင်းအချက်အလက်နိမ်စခွေငျးငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေကိုစမ်းသပ်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
(အထကျကိုကြည့်ပါ) ဆုလာဘ် encoding ကအတွက် NAc နှင့် ventral pallidum ကြားရှိသိသာ link ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, ငါတို့တိရစ္ဆာန်၏အကြိုးကိုပြည်နယ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်မော်ဂျူကထုတ်လုပ်မဆိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပြောင်းအလဲများကို striatopallidal / D2 အာရုံခံအတွက်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားဖြစ်အံ့သောငှါကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ ဤအအာရုံခံများ၏အသေးစိတ်ဇီဝကမ္မဂုဏ်သတ္တိများလေ့လာနေ, အတိတ်တွင်ဤအာရုံခံအတွက် GFP ဖော်ပြကြောင်း BAC Transgene ကြွက် (တစ်လိုင်း၏မကြာသေးမီဖှံ့ဖွိုးတိုးခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်Gong et al ။ , 2003; Lobo et al ။ , 2006) ကဖြစ်နိုင်တဲ့သူတို့ကိုမြင်ယောင်မှဖန်ဆင်းတော်မူပြီ စသည်တို့အတွက် ကိုအလွန် D2 ဆဲလ်၏ဇီဝကမ္မစရိုက်လက္ခဏာတွေများအတွက်အလားအလာလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အချပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ။
electrophysiology-based စမ်းသပ်မှု၏ဒုတိယအမျိုးအစား NAc အာရုံခံအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမော်ဂျူများအတွက်ဆယ်လူလာစက်ပစ္စည်း၏သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများ၏အလုပ်လုပ်တဲ့စကားရပ်ပြောင်းလဲပစ်ရန် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာသုံးပြီးပါဝငျသညျ။ သီအိုရီ, ဒီ NAc အာရုံခံအတွက်အသီးသီးဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်နှင့်အတူဆက်စပ်ပြုခဲ့သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှား၏မော်ဂျူ enable နိုင်ဘူး။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးအသုံးဝင်ပစ်မှတ်မော်လီကျူးများမဟုတ်ဘဲ Basal ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများထိန်းသိမ်းခြင်းထက်အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှား၏လှုပ်ရှားမှု-မှီခိုမော်ဂျူတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောသူတို့သပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားပစ်မှတ်ဖွယ်ရှိအရှင်တားစီး / ဆုလာဘ်အယူအဆ၏အကဲဖြတ်ဖွင့်, ပိုမိုယေဘုယျပစ်မှတ် (ဥပမာ Na + ရုပ်သံလိုင်း subunits) ထက်လှုံ့ဆော်မှုတုန့်ပြန်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းပေးလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, တက်ကြွအာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်ကြိမ်နှုန်း (AHPs)-hyperpolarizations ပြီးနောက်ဆူးထုတ်လုပ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသော ionic conduction ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ AHPs ထုတ်လုပ်ရန်သောလိုင်းများကိုရည်ရွယ်မျိုးဗီဇ (သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်ပင် pharmacologic) ခြယ်လှယ်နှင့်အတူ NAc အာရုံခံပစ်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်, ဤအာရုံခံအတွက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related excitatory တုံ့ပြန်မှုများ၏ပြင်းအားလျော့ရန်နှင့်ဤဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုလျှော့အမူအကျင့်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်စေခြင်းငှါ ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ညွှန်းကိန်း။
အများဆုံးသိသာ pharmacological စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာကြွက်ဟာ NAc သို့တိုက်ရိုက် dopamine D2 ကဲ့သို့ agonists Self-စီမံခန့်ခွဲလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုရှိ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာယခင်အလုပ်ကြွက်ဟာ NAc သို့ D1 တူသောနှင့် D2 ကဲ့သို့ agonists ၏ပေါင်းစပ် Self-စီမံခန့်ခွဲနေစဉ်ကွောငျးဖျောပွသ, သူတို့က (အနည်းဆုံးစမ်းသပ်ပြီးအဆိုပါဆေးများမှာမဟုတျဘဲ Self-စီမံခန့်ခွဲဖြစ်စေတစ်ဦးတည်းမူးယစ်ဆေးအစိတ်အပိုင်းပြုပါIkemoto et al ။ , 1997) ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဤတွေ့ရှိချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်လုပ်အယူအဆ invalidate မှပေါ်လာလိမ့်မယ်နေစဉ်, electrophysiological သက်သေအထောက်အထား NAc အာရုံခံအပေါ် D1 နှင့် D2 receptors ၏ Co-activation အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်, တစ်ခုခုတုန့်ပြန်မတွေ့မမြင်ကြောင်း၎င်းတို့၏အမြှေးပါးစိတ်လှုပ်ရှားတစ်လျှော့ချရေးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုအကြံပြု တစ်ဦးတည်း agonist (O'Donnell နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 1996) ။ ထို့အပြင် ပို. အလုပ်ဂါဘမြို့သား agonists ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc microinfusions များ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်လိုအပ်လျက်ရှိ၏ သမိုင်းကြောင်းအ, ဒီအလုပ် (benzodiazepines-ရာစွဲလမ်းဖြစ်လူသိများကြသည်ဆင်းရဲနိုင်မှုအားဖြင့်နှောင့်နှေးခဲ့သGriffiths ကနှင့် Ator, 1980) ကို NAc အတွက် dopamine function ကိုလျော့ချဖို့၎င်းတို့၏သဘောထားကိုရှိနေသော်လည်း (သစ်သား, 1982; Finlay et al ။ , 1992: Murai et al ။ , 1994) ဆုလာဘ်၏မော်ဒယ်များနှင့်အတူဦးနှောက် microinjection လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတူတကွအသုံးပြုကြသောသုတေသီများ၏အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကကတညျး။ သို့တိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆစမ်းသပ်တခြားနည်းလမ်းတွေ D2 အဲဒီ receptor ပါဝင်သော MSNs ၏မြစ်အောက်ပိုင်းဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်ထိန်းသိမ်းရေးများ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်ပါလိမ့်မယ်။ တနည်းကား, အစောပိုင်းသက်သေအထောက်အထား (ဆုလာဘ်ဟာ ventral pallidum ၏ activation အားဖြင့် encoded သည်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏ MSNs ၏တားစီးတဲ့ယူဆရအကျိုးဆက်အကြံပြုTindell et al ။ , 2006).
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများသို့သွေးဆောင်သို့မဟုတ်ခြွင်းချက်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ၏ညှနျကွားကို enable ပြုလုပ်မျိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာနည်းစနစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ရာနှင့်အတူအရေးပါသော tool ကိုရလိမ့်မည်။ GluRA ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပယ်ဖျက် (GluR1 တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ nomenclature) နဲ့ကြွက် (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ sensitivity ကိုအများအပြားပြောင်းလဲပြသVekovischeva et al ။ , 2001; dong et al ။ , 2004; Mead et al ။ , 2005, 2007), အရာအချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြပြီးအရာအချို့ကိုမရှိကြပေ။ အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် GluR1 ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုသိသိသာသာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအပါအဝင်လှုံ့ဆော်မှုများမြောက်မြားစွာအမျိုးအစားများမှတုန့်ပြန်ပြောင်းနိုင်ဘူး။ ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်သုတေသန NAc အတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းယန္တရားများအပေါ်အလေးပေးသော်လည်းအပြင်ဤ GluR1-Mutant ကြွက်, ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးပရိုတိန်းကင်းမဲ့နေသည်။ သည်အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင် GluR1 ဆုံးရှုံးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု-related အပြုအမူတွေအပေါ်, အံ့သြဖွယ်များနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်လို့ကြောင့်ဤအချက်များကိုအထူးသဖြင့်အရေးကြီးလှသည်။ ကိုယ့်တဦးတည်းသာဓကအဖြစ်ကျနော်တို့ VTA အတွက် GluR1 function ကို၏မော်ဂျူပြသထားသော NAbc အတွက် GluR1 ၏မော်ဂျူနှိုင်းယှဉ်မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုပြင် (Carlezon et al ။ , 1997; Kelz et al ။ , 1999) ။ GluR1-လစ်လပ်ကြွက်တွေအတွက်တွေ့ရှိချက် NAc နှင့် VTA ကနေပေါင်းစပ်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမဟုတ်: ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ GluR1 Mutant ကြွက် (အ NAc အတွက် GluR1 ၏ဆုံးရှုံးမှုများကရှင်းပြခဲ့နိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု) မော်ဖင်းအကိုက်၏လှုံ့ဆော်ဆိုးကျိုးများပိုမိုထိခိုက်မခံများမှာ ဒါပေမယ့်သူတို့ကမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ပါ (VTA အတွက် GluR1 ၏ဆုံးရှုံးမှုများကရှင်းပြခဲ့နိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု) response အတွက်တိုးတက်သောတိုးမဖွံ့ဖြိုးပါဘူးစမ်းသပ်ခြင်းာင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်အပိုဆောင်းဦးနှောက်ဒေသများပါဝင်ကြောင်းအခြေအနေများအောက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်တဦးတည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနောက်ကောက်ကြွက်တွေကနေဒေတာတွေကိုမှ Spatial နှင့်ယာယီအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူတာဝန်ပေးဖို့အတွက်သတိထားဖြစ်ရမည်: စာပေလေ့လာမှုအောက်တွင်ဦးနှောက်ဒေသများပေါ် မူတည်. အပြုအမူအပေါ်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသော (တခါတရံဆန့်ကျင်ဘက်) သက်ရောက်မှုရှိသည်သောပရိုတိန်း၏နမူနာတှေအမြားကွီးဖြစ်လာနေသည် (ကြည့်ရှု Carlezon et al ။ , 2005).
တစ်ဦးκ-opioid agonist ၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုမှအာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်ခြင်းစဉ် NAc ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလျော့နည်းစေသော CREB-တစ်ဦးကိုင်တွယ်တစ်ဦးကြီးစိုး-အနုတ်လက္ခဏာပုံစံ၏သွေးဆောင်စကားရပ်နှင့်အတူကြွက်တွေကနေပဏာမလေ့လာမှုများ (ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ hypersensitive MSNs-များမှာDiNieri et al ။ , 2006) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်လုပ်အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသော်လည်းနောက်ထပ်လေ့လာမှုများ (ဥပမာ electrophysiology) ဤသက်ရောက်မှု၏ဇီဝကမ္မအခြေခံသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုကူညီပေးလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်, Spatial နှင့်ယာယီ NAc MSNs ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထိန်းညှိကြောင်းဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တိုးမြှင့်စွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်အယူအဆ၏အဆငျ့ဆငျ့ကိုပိုပြီးခေတ်မီစမ်းသပ်မှု enable ပါလိမ့်မယ်။
functional ဦးနှောက်ပုံရိပ်, နောက်ဆုံးမှာလူတွေဟာတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိစိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအခြေခံကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုပြောင်းလဲဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ တပ်လှန့် Non-လူ့မျောက်ဝံများနှငျ့ပတျသကျသောပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ပဏာမ data တွေကိုအထက်ဖော်ပြထားတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်အယူအဆ၏ထောက်ခံမှုအတွက်အစောပိုင်းသက်သေအထောက်အထားပေးနေကြသည်။ အဆိုပါκ-opioid agonist U69,593-ရသောတိရစ္ဆာန်များအတွက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်စေလူသိများမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်လူတန်းစားပိုင် (မြင့်မားဆေးများ၏သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်ရေးBals-Kubik et al ။ , 1993; Carlezon et al ။ , 2006) နှင့်လူသားတွေအတွက် dysphoria (Pfeiffer et al ။ , 1986; Wadenberg, 2003) (ထို NAc အတွက်သွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI တုံ့ပြန်မှုအတွက်လေးနက်တိုး -causesသဖန်းသီး။ 3: MJ Kaufman, ခ deb ကနေ။ Fredrick, အက်စ်အက်စ် Negus, အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်; ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ) BOLD signal ကိုတုံ့ပြန်မှု Synaptic လှုပ်ရှားမှုရောင်ပြန်ဟပ်သောအတိုင်းအတာအထိရန်, NAc အတွက် U69,593 အားဖြင့်သွေးဆောင်အပြုသဘော BOLD တုံ့ပြန်မှု (ဖြစ်ကောင်းကြောင့် dopamine input ကိုလျော့နည်းသွားရန်, MSNs ၏တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်DiChiara နှင့် Imperato, 1988; Carlezon et al ။ , 2006) ။ ဆနျ့ကငျြ, အပြုသဘော BOLD signal ကိုတုံ့ပြန်မှု fentanyl တစ်ခု equipotent ထိုး, တစ်အလွန်အမင်းစွဲလမ်းμ-opioid agonist နှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက် NAc အတွက်သိသိသာသာပျက်ကွက်ဖြစ်ကြသည်။ ဤအ fentanyl ဒေတာနှုန်း se အဆိုပါ NAc ၏တားစီးညွှန်ပြကြဘူးနေစဉ်, ဤဒေသတွင် BOLD လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်အယူအဆတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ရှင်းနေသည်မှာအပိုဆောင်း pharmacological နှင့် electrophysiological လေ့လာမှုများကဤ BOLD signal ကိုအပြောင်းအလဲများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလက္ခဏာမှလိုအပ်နေပါသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောသံလိုက်စက်ကွင်းအစှမျးသတ်တိစနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး BOLD အချက်ပြမှုများကိုအရင်းခံဦးနှောက် function ကိုတစ်ဦးပိုမိုအသေးစိတ်ဥာဏ်တံခါးကိုမဖွင့်, ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်နှင့် spectroscopy enable လုပ်ဖို့စတင်နေပါတယ်။
အဆိုပါμ-opioid agonist fentanyl နှင့်κ-opioid agonist ၏သွေးကြောသွင်းတာဟာ U69,593 ထပ်လုပ်ရန်ဆွဲဆောင်လေ့ရှိသော်လည်းခန္ဓာဗေဒရွေးချယ်အသွေးတော်အောက်စီဂျင်အဆင့်ကိုမှီခိုအလုပ်လုပ်တဲ့ MRI (BOLD fMRI) သတိပေးချက်အထီး cynomolgus မျောက်တွေကိုတုံ့ပြန်မှု (N ကို = 3) ။ ...
VI ကို။ နိဂုံး
ခြင်းကိုမနှစ်သက်သည်ဤတူညီသောဆဲလ်၏မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့် encoded ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းကျွန်တော်တို့သည်ဆုလာဘ် NAc MSNs ၏လျော့ချလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် encoded သောစိတ်ဓါတ်များ၏ရိုးရှင်းမော်ဒယ်တင်ပြသည်။ ပိုပြီးတိကျခိုင်မာစွာစာမေးပွဲများလိုအပ်နေပါသည်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်စာပေအတွက်ပြီးသားအထောက်အထားသဘောအရဆိုလျှင်ကထောက်ခံသည်။ ဒါဟာ (သဘာဝဆုလာဘ်မှ sensitivity ကိုလျော့ချခြင်းနှင့်စွဲသံသရာပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းငှါအရာမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ NAc အတွက် inhibitory dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors ၏လျှော့ချနံပါတ်များကိုညွှန်ပြလက်တွေ့လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Volkow et al ။ , 2007) ။ မော်လီကျူးများနှင့်ဦးနှောက်ပုံရိပ်နည်းစနစ်များ၏ဆက်လက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးဒီ model အတည်ပြုသို့မဟုတ်ချေပရန်အတွက်ပါဝါရှိသည်သောလေ့လာမှုများ၏ဒီဇိုင်းကိုမှအထောက်အကူသောသုတေသနပတ်ဝန်းကျင်ထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဤစိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များရဲ့မော်လီကျူးအခြေခံ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုသုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာကနေစုဆောင်းအသိပညာစွဲပြုမူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကာကွယ်တားဆီးဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါဆန်းသစ်ချဉ်းကပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုအသုံးပြုသည်အထူးသဖြင့်အဖြစ်အစဉ်စွဲအရေးကြီးသောနှင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်နှင့်အခြားအခြေအနေများ (ဥပမာစိတ်ဓါတ်များမမှန် ) လှုံ့ဆျောမှု၏ dysregulation နှင့်ဆက်နွယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (NIDA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုအားဖြင့်ရန်ပုံငွေ (WAC) ကို DA012736 နှင့် (MJT မှ) DA019666 နှင့် (MJT ရန်) တစ်ဦး McKnight-မြေ Grant ကပါမောက္ခပေးထားတယ်။ ကျနော်တို့ MJ Kaufman, ခ deb ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မျောက်များမှာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အတည်မပြုရသေးသောဒေတာကိုးကားဖို့ခွင့်ပြုချက်အဘို့အ Fredrick နှင့်အက်စ်အက်စ် Negus ။
Albin RL, Young က AB, Penney JB ။ Basal ganglia မမှန်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1989;12: 366-75 ။ [PubMed]
Bals-Kubik R ကို, Ableitner တစ်ဦးက, Herz တစ်ဦးက, Shippenberg TS ။ ကြွက်များတွင် conditional ရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းခြင်းဖြင့်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်အဖြစ် opioids များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေ Neuroanatomical ဆိုဒ်များ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1993;264: 489-95 ။ [PubMed]
Benavides DR, Quinn JJ, Zhong P ကို, Hawasli AH, DiLeone RJ, Kansy JW, Olausson P ကို, ယန် Z ကို, တေလာ JR, Bibb ဂျေအေ။ Cdk5 ကင်းဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့် striatal အာရုံခံဆဲလျစိတ်လှုပ်ရှား modulates ။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 12967-12976 ။ [PubMed]
Bodnar RJ, Glass ကို MJ, Ragnauth တစ်ဦးက, Cooper က ML ။ နျူကလီးယပ်အတွက်အထွေထွေ, mu နှင့် Kappa opioid ရန်ဆင်းရဲချို့တဲ့, glucoprivic နှင့်အရေးပါတယ်လို့အခြေအနေများအောက်တွင်အစားအစာစားသုံးမှုပြောင်းလဲ accumbens ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995;700: 205-212 ။ [PubMed]
ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာသို့ Bozarth MA, မော်ဖင်းအကိုက်ပညာရှိ R. Intracranial Self-အုပ်ချုပ်မှု။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1981;28: 551-5 ။ [PubMed]
Bozarth MA, ပညာရှိ RA ။ opiate အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1983;7: 569-75 ။ [PubMed]
ကာဣန SB, Negus အက်စ်အက်စ်, Mello NK ။ dopamine: D (1 ကဲ့သို့သော) နှင့် D ကို (2 ကဲ့သို့) ၏ဆိုးကျိုးများမျောက်တွေကိုအတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် agonists: ကင်းထိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏လျင်မြန်သောအကဲဖြတ်။ Psychopharmacol ။ 2000;148: 41-51 ။ [PubMed]
ကြွက်များတွင်ကာဣန SB, Negus အက်စ်အက်စ်, Mello NK, dopamine: D (1 ကဲ့သို့) ၏ Bergman ဂျေအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် D ကို (2-လိုမျိုး) agonists Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းသော။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1999;291: 353-60 ။ [PubMed]
Carelli RM, Ijames စင်ကာပူဒေါ်လာ, Crumling AJ ။ အထောက်အထားများအနျူကလိယအတွက်သီးခြားအာရုံကြောဆားကစ် "သဘာဝ" (ရေနှင့်အစားအစာ) ဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်အန်ကုက်လုပ်ကိုကင်း accumbens သော။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: 4255-4266 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Beguin ကို C, DiNieri ဂျာ Baumann MH, Richards MR, Todtenkopf က MS, Rothman RB, Ma Z ကို, Lee က Dy, Cohen ကို BM ။ ကြွက်များတွင်အပြုအမူနှင့် neurochemistry အပေါ်တစ်ဦးက salvinorin အဆိုပါ Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ၏စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2006;316: 440-7 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Jr က Boundy VA သို့, မိုးသီး CN, ယာဉ်ကြော SB, Kalb RG, Neve RL, Nestler EJ ။ ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်မော်ဖင်းအကိုက်ထိခိုက်မခံတဲ့။ သိပ္ပံ။ 1997;277: 812-4 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Devine DP, ပညာရှိ RA ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် nomifensine ၏အလေ့အထ-ဖွဲ့စည်းလုပ်ရပ်တွေကို။ Psychopharmacol ။ 1995;122: 194-7 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Duman RS, Nestler EJ ။ CREB ၏များစွာကိုမျက်နှာများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2005;28: 436-45 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Nestler EJ ။ အဆိုပါ midbrain အတွက် GluR1 ၏ elevated အဆင့်ဆင့်: အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများထိခိုက်မခံတဲ့အတှကျခလုတ်? ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2002;25: 610-5 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Thome J ကို, Olson VG, ယာဉ်ကြော-Ladd SB, Brodkin ES, Hiroi N ကို, Duman RS, Neve RL, Nestler EJ ။ CREB အားဖြင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ သိပ္ပံ။ 1998;282: 2272-5 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Jr က Thome J ကို, Olson VG, ယာဉ်ကြော-Ladd SB, Brodkin ES, Hiroi N ကို, Duman RS, Neve RL, Nestler EJ ။ CREB အားဖြင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ သိပ္ပံ။ 1998;282: 2272-2275 ။ [PubMed]
Carlezon WA, ပညာရှိ RA ။ နျူကလိယအတွက် phencyclidine နှင့်ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ရပ်များ shell ကိုနှင့်တိုကျရိုကျ cortex accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 1996;16: 3112-22 ။ [PubMed]
Chang JY, Zhang က L ကို, Janak PH သည်, Woodward DJ သမား။ လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျားဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အတွက်အာရုံခံတုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1997;754: 12-20 ။ [PubMed]
Chao SZ, Ariano MA, Peterson DA, ME Wolf ။ D1 dopamine အဲဒီ receptor ဆွနျူကလိယအတွက် GluR1 မျက်နှာပြင်စကားရပ်တွင် neuron accumbens တိုးပွားစေပါသည်။ J ကို Neurochem ။ 2002;83: 704-712 ။ [PubMed]
Chartoff Eh, Mague SD, Barhight MF, Smith ကလေး, Carlezon WA ။ , Jr အပြုအမူနှင့် naloxone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်က dopamine D1 အဲဒီ receptor ဆွ၏မော်လီကျူးဆိုးကျိုးများ။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 6450-7 ။ [PubMed]
Chartoff Eh, Pliakas လေး, Carlezon WA ။ မှ L-type အမျိုးအစားကယ်လစီယမ်ရုပ်သံလိုင်းရန် diltiazem ၏ Jr Microinjection အဆိုပါ ventral နျူကလိယသို့ shell ကိုကိုကင်း-သွေးဆောင် conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် accumbens ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;59: 1236-9 ။ [PubMed]
Chen က MC, Parsegian တစ်ဦးက, Carlezon WA ။ , ကြွက်များတွင် intracranial Self-stimulation အပေါ် Kappa-opioid agonist U50,488 ၏ mesocorticolimbic microinjections ၏ Jr Effect ။ Soc neuroscience Abstr ။ 2008;34 စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
Childress AR ။ အဘယ်အရာကိုလူ့ဦးနှောက်ပုံရိပ် addiction နှင့်ပြန်သွားကြသည်ဖို့အားနည်းချက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်မလား? ခုနှစ်တွင်: Miller က WR, ကာရိုး KM, အယ်ဒီတာများ။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု Rethinking: အဘယျအသိပ္ပံပြပွဲနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့ကအကြောင်းပြုပါသင့်တယ်။ နယူးယောက်: Guilford; 2006 ။ စစ။ 46-60 ။
Churchill L ကို, Swanson CJ, Urbina M က, Kalivas PW ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းသည့်နျူကလိယ accumbens နှင့်အမူအကျင့်ာင်းဖွံ့ဖြိုးကြောင်းကြွက်၏ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအချိုမှု receptor subunit အဆင့်ဆင့်ပွောငျးလဲ။ J ကို Neurochem ။ 1999;72: 2397-403 ။ [PubMed]
Cooper က, DC, အဖြူရောင် FJ ။ L-type ကိုကယ်လစီယမ်လိုင်းများ Vivo အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်အချိုမှု-မောင်းနှင် burst လှုပ်ရှားမှု modulate ။ ဦးနှောက် Res ။ 2000;880: 212-8 ။ [PubMed]
က de Rover က M, Lodder JC, ပစ္စည်းများ KS, Schoffelmeer AN, Brussaard AB ။ နျူကလိယ၏ Cholinergic မော်ဂျူအလတ်စား spiny အာရုံခံ accumbens ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2002;16: 2279-2290 ။ [PubMed]
di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1988;85: 5274-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
DiNieri ဂျာ Carl T က, Nestler EJ, Carlezon WA ။ , နျူကလိယအတွင်း CREB လှုပ်ရှားမှု Jr သွေးဆောင်နှောင့်အယှက်အကြိုးနှင့် prodepressive မူးယစ်ဆေးဝါးများမှအတ္တ ဟူ. သော်လည်းကောင်း sensitivity ကို accumbens ။ Soc neuroscience Abstr ။ 2006;32
dong Y ကို, Saal D ကိုသောမတ်စ်က M, Faust R ကို, Bonci တစ်ဦးက, ရော်ဘင်ဆင်သည် T, Malenka RC ။ dopamine အာရုံခံအတွက် Synaptic အစွမ်းသတ္တိ၏ကင်း-သွေးဆောင်အလားအလာ: အပြုအမူ GluRA အတွက်ဆက်စပ်မှု (- / -) ကြွက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2004;101: 14282-14287 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
dong Y ကို, အစိမ်းရောင် T က, Saal: D, Marie H ကို, Neve R ကို, Nestler EJ, Malenka RC ။ CREB နျူကလိယ accumbens အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် modulates ။ နတ် neuroscience ။ 2006;9: 475-7 ။ [PubMed]
Donzanti BA, Althaus JS, Payson MM, Von Voigtlander PF ။ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် Kappa agonist-သွေးဆောင်လျော့ချရေး: အရေးယူမှုနှင့်သည်းခံစိတ်၏ site ကို။ res Community Chem Pathol Pharmacol ။ 1992;78: 193-210 ။ [PubMed]
Dunn AJ ။ ဦးနှောက် dopaminergic စနစ်များစိတ်ဖိစီးမှု-related activation ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1988;537: 188-205 ။ [PubMed]
အဲလ် GI, Pieper Jo, Levy J ကို, Rubinstein M က, အနိမျ့ MJ, ယူဆပါတယ် DK, ပညာရှိ RA ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာဦးနှောက်ဆွနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှု။ Psychopharmacol ။ 2005;182: 33-44 ။ [PubMed]
Fibiger HC, Nomikos GG, Pfaus JG, Damsma G. အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အစာစားခြင်းနှင့် mesolimbic dopamine ။ Clin Neuropharmacol 15 ပျော့ပျောင်း။ 1992;1: 566A-567A ။ [PubMed]
Finlay JM, Damsma, G, Fibiger HC ။ စူးရှနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ extracellular ပြင်းအားအတွက် Benzodiazepine-သွေးဆောင်လျှောက်လျော့နည်း။ Psychopharmacol ။ 1992;106: 202-8 ။ [PubMed]
Franklin TR, ဝမ် Z ကို, ဝမ် J ကို, Sciortino N ကို, Harper ကို: D လီ Y ကို, Ehrman R ကို, Kampman K သည်, O 'Brien က CP, Detre ဂျာ ​​Childress AR ။ နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ၏လွတ်လပ်သောစီးကရက်ဆေးလိပ်တွေကိုမှ Limbic activation: တစ် perfusion fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacol ။ 2007;32: 2301-9 ။ [PubMed]
Gerfen CR, Engber TM, မာဟန် LC, Susel Z ကို, Chase TN, Monsma FJ, Jr က Sibley DR ။ D1 နှင့် D2 striatonigral နှင့် striatopallidal အာရုံခံ၏ dopamine အဲဒီ receptor-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇစကားရပ်။ သိပ္ပံ။ 1990;250: 1429-32 ။ [PubMed]
Goeders NE, Smith က je ။ ကိုကင်းအားဖြည့်အတွက် cortical dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ သိပ္ပံ။ 1983;221: 773-5 ။ [PubMed]
Gong က S, Zheng က C, Doughty ML, Losos K ကို Didkovsky N ကို, Schambra UB, Nowak NJ, Joyner တစ်ဦးက, Leblanc, G, Hatten ME, Heintz N. ဘက်တီးရီးယားအတုခရိုမိုဆုမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အဖြေမျိုးဗီဇစကားရပ် Atlas ။ သဘာဝ။ 2003;425: 917-925 ။ [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Floresco SB, Goto Y ကို, Lodge DJ သမား။ dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်၏ပစ်ခတ်ရန်၏စည်းမျဉ်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007;30: 220-7 ။ [PubMed]
Gracy KN, Dankiewicz LA က, Koob gf ။ ကြွက်တိုးချဲ့ amygdala အတွက် Opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် fos immunoreactivity conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှုနဲ့အပြိုင်။ Neuropsychopharmacol ။ 2001;24: 152-60 ။ [PubMed]
Griffiths က RR, Ator NA ။ Benzodiazepine တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားတွေအတွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး: တစ်ပြည့်စုံစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ NIDA Res Monogr ။ 1980;33: 22-36 ။ [PubMed]
Guix T က, Hurd YL, Ungerstedt U. ဖက်တမင်းဆေးပြားလွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား၏ dorsolateral striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine နဲ့ acetylcholine ၏ extracellular ပြင်းအားပိုကောင်းစေပါတယ်။ neuroscience လက်တ။ 1992;138: 137-140 ။ [PubMed]
Hakan RL, Henriksen SJ ။ dopamine နဲ့ Non-dopamine ယန္တရားများ: နျူကလိယအပေါ် Opiate လွှမ်းမိုးမှုအာရုံခံ electrophysiology accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 1989;9: 3538-3546 ။ [PubMed]
Hallett PJ, Spoelgen R ကို, Hyman BT, Standaert DG, Dunah AW ။ Dopamine D1 activation tyrosine phosphorylation-မှီခို subunit လူကုန်ကူးမှုအားဖြင့် striatal NMDA receptors potentiates ။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 4690-700 ။ [PubMed]
Harris က GC, အ opiate ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် D2 dopamine receptors ၏ Aston-ဂျုံးစ် G. အပါဝင်ပတ်သက်မှု။ သဘာဝ။ 1994;371: 155-7 ။ [PubMed]
Herman JP, Rivet JM, Abrous N က, က Le Moal အမ် Intracerebral dopaminergic အစားထိုး situ mesocorticolimbic အာရုံခံအတွက်သက်ဝင်လျှပ်စစ် footshock စိတ်ဖိစီးမှုများက activated ကြသည်မဟုတ်။ neuroscience လက်တ။ 1988;90: 83-8 ။ [PubMed]
Hoebel BG, မိုနာကိုက AP, ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Aulisi EF, Stanley BG, စိတ်ကြွဆေး၏ Lenard အဆိုအရအယ်လ်ကိုယ်ပိုင်ဆေးထိုးတိုက်ရိုက်ဦးနှောက်သို့။ Psychopharmacol ။ 1983;81: 158-63 ။ [PubMed]
Hollmann M, Hartley M, Heinemann S. Ca2 + KA-AMPA-gated glutamate receptor channel များ၏ permeability သည် subunit ဖွဲ့စည်းမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သိပ္ပံ။ 1991;252: 851-3 ။ [PubMed]
ဟူ XT, Basu က S, အဖြူရောင် FJ ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေး HVA-Ca2 + အလားအလာဖိနှိပ်နှင့်အာရုံခံ accumbens ကြွက်နျူကလိယထဲမှာ K + လိုင်းများ၏လှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို Neurophysiol ။ 2004;92: 1597-1607 ။ [PubMed]
intracranial Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများ: ကင်းဆုလာဘ်အတွက် olfactory tubercle ၏ Ikemoto ဗြဲပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2003;23: 9305-9311 ။ [PubMed]
Ikemoto S က, Glazier BS, မာဖီ JM, McBride WJ ။ ဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors ၏အခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience ။ 1997;17: 8580-7 ။ [PubMed]
Imperato တစ်ဦးက, Obinu MC, Demontis သင်္ဘော MV, Gessa GL ။ ကိုကင်း D1 receptors အပေါ် endogenous dopamine အရေးယူမှတဆင့် limbic acetylcholine ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1992;229: 265-267 ။ [PubMed]
Janak PH သည်, Chang JY, Woodward DJ သမား။ အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းကြွက်ပြုမူ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်အာရုံခံဆူးလှုပ်ရှားမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1999;817: 172-184 ။ [PubMed]
ဂျွန်ဆင် SW, မြောက်အမေရိက RA ။ Opioids ဒေသခံ interneurons ၏ hyperpolarization အားဖြင့် dopamine အာရုံခံ excite ။ J ကို neuroscience ။ 1992;12: 483-8 ။ [PubMed]
Kalivas PW, ကြွက်များတွင် mesocorticolimbic dopamine neurotransmission အပေါ်နေ့စဉ်ကင်းခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု Duffy P. အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1989;25: 913-28 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE, EP, Swanson CJ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့။ ကြွက်များတွင်တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် sucrose အရက်သောက်ပေါ်တွင်နျူကလိယ accumbens သို့ထုံမွှန်း opiate ရန်များ၏သက်ရောက်မှု၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1996;278: 1499-1507 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE ။ အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ Ventral striatal ထိန်းချုပ်မှု: စားသုံးမိအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2004;27: 765-76 ။ [PubMed]
Kelsey je, Carlezon WA, ရေတံခွန် WA ။ ကြွက်များတွင်နျူကလိယ accumbens ၏တွေ့ရှိရပါသည် opiate ဆုလာဘ်ကိုလျှော့ချပေမယ့်အခြေအနေတွင်-တိကျတဲ့ opiate သည်းခံစိတ်ပြောင်းလဲပစ်ကြဘူး။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1989;103: 1327-34 ။ [PubMed]
Kelz ကို MB, Chen က J ကို, Carlezon WA, Whisler K ကို Gilden L ကို, Beckmann လေး, Steffen ကို C, Zhang က YJ, Marotti L ကို, ကိုယ်ပိုင် DW, Tkatch T က, Baranauskas, G, Surmeier DJ သမား, Neve RL, Duman RS, Picciotto MR, Nestler EJ ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999;401: 272-6 ။ [PubMed]
Kessler RC, Zhao နှင့် S က, Blazer DG Swartz ကိုအမ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့, ဆက်စပ်မှုများနှင့်အမျိုးသား Comorbidity စစ်တမ်းများတွင်အသေးစားစိတ်ကျရောဂါနှင့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါ၏သင်တန်း။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 1997;45: 19-30 ။ [PubMed]
Kourrich S က, Rothwell PE, Klug JR, သောမတ်စ် MJ ။ ကိုကင်းအတွေ့အကြုံကိုယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် bidirectional Synaptic plasticity ထိန်းချုပ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 7921-7928 ။ [PubMed]
Leone P ကို, Pocock: D, ပညာရှိ RA ။ မော်ဖင်းအကိုက်-dopamine အပြန်အလှန်: ventral tegmental မော်ဖင်းအကိုက်နျူကလိယ dopamine လွှတ်ပေးရန် accumbens တိုးပွားစေပါသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1991;39: 469-72 ။ [PubMed]
လျူ ZH, ရှင် R ကို, ကိုထိခိုက် Encoding အတွက် Medial A10 Dopamine အာရုံခံ၏ Ikemoto အက်စ် Dual-အခန်းက္ပ။ Neuropsychopharmacol ။ 2008 စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lobo MK, Karsten SL, Grey က M ကို, Geschwind DH ယန် XW ။ လူငယ်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် striatal projection အာရုံခံဆဲလျ Subtype ၏ FACS-ခင်းကျင်းကို။ နတ် neuroscience ။ 2006;9: 443-452 ။ [PubMed]
Mague SD, Pliakas လေး, Todtenkopf က MS, Tomasiewicz HC, Zhang က Y ကို, Stevens WC, ဂျုံးစ် RM, Portoghese PS, Carlezon WA ။ ကြွက်များအတွင်းအတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက် Kappa-opioid အဲဒီ receptor ရန်၏, Jr စိတ်မကျဆေး Antidepressants ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2003;305: 323-30 ။ [PubMed]
Maldonado R ကို, Saiardi တစ်ဦးက, Valverde အို Samad က TA, Roques ကို BP, dopamine D2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ opiate ကြိုးသက်ရောက်မှု၏ Borrelli အီးမရှိခြင်း။ သဘာဝ။ 1997;388: 586-9 ။ [PubMed]
Malinow R ကို, Malenka RC ။ AMPA အဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှုနှင့် Synaptic plasticity ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2002;25: 103-26 ။ [PubMed]
Mangiavacchi S က, ME Wolf ။ D1 dopamine အဲဒီ receptor ဆွယဉ်နျူကလိယ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ AMPA အဲဒီ receptor သွင်းနှုန်းတိုးပွါးပရိုတိန်း kinase အေအပေါ်မှီခိုနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှတဆင့်အာရုံခံ accumbens J ကို Neurochem ။ 2004;88: 1261-1271 ။ [PubMed]
Mansour တစ်ဦးက, Watson ဟာ SJ, Akil အိပ်ချ် Opioid receptors: အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1995;18: 69-70 ။ [PubMed]
မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Rada P ကို, Pothos အီး, Hoebel BG ။ acetylcholine နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ဖြန့်ချိ, striatum နှင့်လွတ်လပ်စွာကြွက်ပြုမူ၏ hippocampus အပေါ်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အရက်သောက်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Neurochem ။ 1992;58: 2269-2274 ။ [PubMed]
Mead AN, ဘရောင်း, G, Le Merrer J ကို, Stephens DN ။ ကြွက်များတွင်နေရာအရပ် preference ကိုအေးစက်အပေါ် glutamatergic AMPA-receptor subunits ကုဒ်သွင်း gria1 သို့မဟုတ် gria2 မျိုးဗီဇ၏ဖျက်မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2005;179: 164-171 ။ [PubMed]
Mead AN, Zamanillo: D, Becker က N ကို, Stephens DN ။ AMPA-receptor GluR1 subunits ကင်း-တွဲတွေကိုအားဖြင့်အမူအကျင့်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 343-353 ။ [PubMed]
ဆက်မက်ကာသီ PS, Walker က RJ, Woodruff Gn ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အာရုံခံအပေါ် enkephalins ၏စိတ်ကျရောဂါလုပ်ရပ်များ [တရားစွဲဆိုမှု] J ကို Physiol ။ 1977;267: 40P-41P ။ [PubMed]
McFarland K ကို Davidge SB, Lapish CC ကို, Kalivas PW ။ Limbic နှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ footshock-သွေးဆောင် reinstatement အခြေခံမော်တာ circuitry ။ J ကို neuroscience ။ 2004;24: 1551-60 ။ [PubMed]
Meredith GE ။ နျူကလိယ accumbens အတွက်ဓာတုအချက်ပြများအတွက် Synaptic မူဘောင်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1999;877: 140-56 ။ [PubMed]
Mizrahi R ကို, Rusjan P ကို, Agid အို Graff တစ်ဦးက, Mamo, DC, Zipursky RB, antipsychotics နှင့် striatal နှင့် extrastriatal D2 receptors ရန်၎င်း၏ဆကျဆံရေး Kapur အက်စ်ဆိုးရွားသောပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကို: schizophrenia တစ်ပေလေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;164: 630-637 ။ [PubMed]
Murai T က, Koshikawa N ကို, Kanayama T က, Takada K ကို Tomiyama K ကို Kobayashi အမ်ထဲမှာ Vivo microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာကြွက်နျူကလိယ accumbens ထံမှ dopamine များလွှတ်ပေးရေးအပေါ် midazolam နှင့် beta ကို-carboline-3-carboxylate ethyl Ester ၏အတိုက်အခံဆိုးကျိုးများ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1994;261: 65-71 ။ [PubMed]
Nestler EJ, Carlezon WA ။ , Jr စိတ်ကျရောဂါအတွက် mesolimbic dopamine ဆုလာဘ် circuit ကို။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;59: 1151-9 ။ [PubMed]
နယူတန်အက်စ်အက်စ်, Thome J ကို, Wallace TL, Shirayama Y ကို, Schlesinger L ကို, Sakai က N ကို, ချန် J ကို, Neve R ကို, Nestler EJ, Duman သည် RS ။ နျူကလီးယပ်အတွက်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းသို့မဟုတ် dynorphin ၏တားစီးလက္ခဏာတူသောအကျိုးသက်ရောက်ထုတ်လုပ် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 10883-90 ။ [PubMed]
Nicola သည် SM, Yun IA, Wakabayashi KT, Fields HL ။ နျူကလိယ၏ပစ်ခတ်ရန်တစ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များ၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်စဉ်အတွင်းအာရုံခံ accumbens ယခင်ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ J ကို Neurophysiol ။ 2004;91: 1866-1882 ။ [PubMed]
O'Donnell P ကိုရေ့ AA ကို။ နျူကလိယအတွက်စိတ်လှုပ်ရှား၏ Dopaminergic လျှော့ချရေးစသည်တို့တှငျမှတျတမျးတငျထားသအာရုံခံ accumbens ။ Neuropsychopharmacol ။ 1996;15: 87-97 ။ [PubMed]
O'Donnell P ကိုရေ့ AA ကို။ accumbens အာရုံခံ nucleus မှ excitatory afferents ကြားတွင် Synaptic interaction က: prefrontal cortical ရဲ့ input ၏ hippocampal Gates ။ J ကို neuroscience ။ 1995;15: 3622-39 ။ [PubMed]
ကြားရှိ ME ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်သက်ရောက်မှုအားဖြည့်။ ဦးနှောက် Res ။ 1982;237: 429-40 ။ [PubMed]
Parsegian တစ်ဦးက, Todtenkopf က MS, Neve RL, Carlezon WA ။ , အနျူကလိယ accumbens အတွက် CREB ထုတ်ဖော် Jr Viral အားနည်းချက်ကို-သွေးဆောင်မြင့်တက်ကြွက် intracranial Self-stimulation (ICSS) စမ်းသပ်မှုအတွက် anhedonia ထုတ်လုပ်သည်။ Soc neuroscience Abstr ။ 2006;33 စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
Pennartz CM, Boeijinga PH သည်, Lopes da Silva FH ။ ဒေသအလိုက်ကြွက်နျူကလိယ၏အချပ်အတွက်အလားအလာ evoked accumbens: NMDA နှင့် Non-NMDA အဲဒီ receptor ဂါဘမြို့သားများကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်မော်ဂျူကမကထပြုခဲ့။ ဦးနှောက် Res ။ 1990;529: 30-41 ။ [PubMed]
လူမျိုး ll, အနောက် MO ကို။ သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏အချိန်ကိုက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်တစ်ခုတည်းတွင် neuron ၏ Phasic ပစ်ခတ်ရန်။ J ကို neuroscience ။ 1996;16: 3459-3473 ။ [PubMed]
လူမျိုး ll, Kravitz AV စနစ်, Guillem K. ကိုကင်းစွဲအတွက် accumbal hypoactivity ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ScientificWorldJournal ။ 2007;7: 22-45 ။ [PubMed]
Pfaus JG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology ။ Curr Opin Neurobiol ။ 1999;9: 751-8 ။ [PubMed]
Pfeiffer တစ်ဦးက, Brantl V ကို, Herz တစ်ဦးက, Emrich HM ။ Psychotomimesis Kappa opiate receptors ကကမကထပြုခဲ့။ သိပ္ပံ။ 1986;233: 774-6 ။ [PubMed]
Phillips က AG က, amygdale ၏ဆွအားဖြင့်ကြွက်များတွင် conditional အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ LePiane G. အ Disruption: တစ်အေးစက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ဘဲသတိမေ့ခြင်း။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1980;94: 664-74 ။ [PubMed]
Pliakas လေး, Carlson RR, Neve RL, Konradi ကို C, Nestler EJ, Carlezon WA ။ , Jr ALTER တုန့်ပြန်ကင်းရန်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်မြင့်မားသောစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းစကားရပ်နှင့်အတူဆက်စပ်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက် immobility တိုးတက်လာခဲ့သည်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: 7397-403 ။ [PubMed]
Rajadhyaksha တစ်ဦးက, Barczak တစ်ဦးက, Macías W က, Leveque JC, Lewis က SE, Konradi C. L-အမျိုးအစား Ca (2 +) လိုင်းများအချိုမှု-mediated CREB phosphorylation နှင့် striatal အာရုံခံအတွက်က c-fos ဗီဇစကားရပ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 1999;19: 6348-59 ။ [PubMed]
ရောဘတ်, DC, Koob gf, Klonoff P ကို, Fibiger HC ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးသုဉ်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1980;12: 781-7 ။ [PubMed]
Roitman MF, ဝီ RA, Carelli RM ။ နျူကလိယတွင် neuron ပင်, ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိအရသာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ညှိသူတို့ရဲ့ခန့်မှန်းဝှက်နှင့်မော်တာ output ကိုချိတ်ဆက်နေကြပါတယ် accumbens ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005;45: 587-97 ။ [PubMed]
Smith က KS, Berridge KC ။ အကျိုးသည် Opioid limbic ဆားကစ်: နျူကလိယ accumbens ၏ hedonic ဟော့စပေါ့နှင့် ventral pallidum အကြားအပြန်အလှန်။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 1594-1605 ။ [PubMed]
Snyder GL, Allen က PB, Fienberg AA ကို, Valle CG, Huganir RL, Nairn AC အ, Vivo အတွက် dopamine နဲ့ psychostimulants အားဖြင့် neostriatum အတွက် GluR1 AMPA အဲဒီ receptor ၏ phosphorylation ၏ Greengard P. စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: 4480-8 ။ [PubMed]
Spanagel R ကို, Herz တစ်ဦးက, Shippenberg TS ။ ဆန့်ကျင်လုပ်သူများတက်ကြွ endogenous opioid စနစ်များ mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း modulate ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1992;89: 2046-50 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stinus L ကို, Le Moal က M, Koob gf ။ နျူကလိယ accumbens နှင့် amygdala opiate ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှုများအတွက်တတ်နိုင်သမျှအလွှာဖြစ်ကြသည်။ neuroscience ။ 1990;37: 767-73 ။ [PubMed]
Sun က X ကို, Milovanovic M က, Zhao နှင့် Y ကို, ME Wolf ။ acute နှင့်နာတာရှည် dopamine အဲဒီ receptor ဆွနျူကလိယအတွက် AMPA အဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှု prefrontal cortex အာရုံခံနှင့်အတူ cocultured အာရုံခံ accumbens modulates ။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 4216-30 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Surmeier DJ သမား, Ding J ကို, နေ့ M က, ဝမ် Z ကို, striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် striatal glutamatergic အချက်ပြ၏ Shen ဒဗလျူ D1 နှင့် D2 dopamine-receptor မော်ဂျူ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007;30: 228-35 ။ [PubMed]
Svingos AL, Colago EE, Pickel VM က။ ကြွက်နျူကလိယအတွက် Kappa-opioid receptors ၏ activation dynorphin ဘို့ဆယ်လူလာဆိုဒ်များ shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 1999;19: 1804-13 ။ [PubMed]
Swanson GT ကို, Kamboj SK ကို, Cull-Candy စင်ကာပူဒေါ်လာ။ recombinant AMPA receptors ၏ single-ရုပ်သံလိုင်းဂုဏ်သတ္တိများ RNA တည်းဖြတ်ရေး, splice အပြောင်းအလဲနှင့် subunit ဖွဲ့စည်းမှုပေါ်မူတည်သည်။ J ကို neuroscience ။ 1997;17: 58-69 ။ [PubMed]
Taha လုပ် SA, Fields HL ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ကွဲပြားအာရုံခံလူဦးရေအားဖြင့်အာခေါင်နဲ့အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူများ encoding ။ J ကို neuroscience ။ 2005;25: 1193-1202 ။ [PubMed]
Tindell AJ, Berridge KC, Aldridge JW ။ လူဦးရေနှင့်နှုန်းကို codes တွေကို: pavlovian တွေကိုနှင့်ဆုလာဘ်၏ Ventral pallidal ကိုယ်စားပြုမှု။ J ကို neuroscience ။ 2004;24: 1058-69 ။ [PubMed]
Tindell AJ, Smith က KS, Peciña S က, Berridge KC, Aldridge JW ။ မကောင်းတဲ့အရသာကောင်းသောအလှည့်သည့်အခါ: codes တွေကို hedonic ဆုလာဘ်ပစ်ခတ် Ventral pallidum ။ J ကို Neurophysiol ။ 2006;96: 2399-409 ။ [PubMed]
Todtenkopf က MS, Marcus JF, Portoghese PS, Carlezon WA ။ , ကြွက်များတွင် intracranial Self-stimulation အပေါ် Kappa-opioid အဲဒီ receptor ligands ၏ Jr အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacol ။ 2004;172: 463-70 ။ [PubMed]
Todtenkopf က MS, Parsegian တစ်ဦးက, Naydenov တစ်ဦးက, Neve RL, Konradi ကို C, Carlezon WA ။ , နျူကလိယအတွက် AMPA အဲဒီ receptor subunits နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Jr ဦးနှောက်ဆုလာဘ် shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 11665-9 ။ [PubMed]
Todtenkopf က MS, ကြယ် JR ။ ယင်းနျူကလိယ၏ငါးငျဒသေအတွက် tyrosine hydroxylase immunoreactive innervation ၏အကဲဖြတ်ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းနဲ့ကုသကြွက်များတွင် shell ကို accumbens ။ synapses ။ 2000;38: 261-70 ။ [PubMed]
Trujillo Ka, Belluzzi JD, Stein အယ်လ် Opiate ရန်နှင့် Self-stimulation: သုဉ်းကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုပုံစံများရွေးချယ်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1989;492: 15-28 ။ [PubMed]
Turgeon သည် SM, Pollack AE, က Fink JS ။ Enhanced CREB phosphorylation နှင့် striatum အတွက်က c-Fos နှင့် FRA စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများစိတ်ကြွဆေးာင်းအတူလိုက်ပါ။ ဦးနှောက် Res ။ 1997;749: 120-6 ။ [PubMed]
Uchimura N ကို, Higashi H ကို, Nishi အက်စ်အမြှေးပါးဂုဏ်သတ္တိများနှင့် guinea ဝက်နျူကလိယ၏ Synaptic တုံ့ပြန်မှုစသည်တို့အတွက်အာရုံခံ accumbens ။ J ကို Neurophysiol ။ 1989;61: 769-779 ။ [PubMed]
Vekovischeva Oy, Zamanillo: D, Echenko အိုSeppälä T က, Uusi-Oukari M က, Honkanen တစ်ဦးက, Seeburg PH သည်, Sprengel R ကို, Korpi ER ။ မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်မှီခိုအရေးကြီးတဲ့ AMPA-type အမျိုးအစားအချိုမှု receptor-တစ်ဦးက subunits အတွက် deficient ကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲနေကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: 4451-9 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Swanson JM, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Telang အက်ဖ် Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုဂယက်၏ရလဒ်များကို။ Arch Neurol ။ 2007;64: 1575-9 ။ [PubMed]
Wadenberg ML ။ spiradoline ၏ဂုဏ်သတ္တိများ၏တစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: တစ်အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ။ CNS မူးယစ်ဆေးဗျာ 2003;9: 187-98 ။ [PubMed]
Weiss RD ။ အရက်နှင့် opioid မှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် pharmacotherapy မှလိုက်နာမှု။ စွဲလမ်း။ 2004;99: 1382-92 ။ [PubMed]
Welter M က, Vallone: ​​D, Samad က TA, Meziane H ကို, Usiello တစ်ဦးက, dopamine D2 receptors ၏ Borrelli အီးမရှိခြင်းကိုကင်းများက activated ဦးနှောက် circuitries ကျော်တစ်ဦး inhibitory ထိန်းချုပ်မှု unmasks ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007;104: 6840-5 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အနောက် TE, ပညာရှိ RA ။ နျူကလိယ accumbens, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic နှင့် ventral tegmental Self-stimulation မှုနှုန်း-အကြိမ်ရေလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါ် naltrexone ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1988;462: 126-33 ။ [PubMed]
ဝီ RA, ကြိုး RC, ဂျုံးစ် JL, Slater JM, Grigson PS, Carelli RM ။ အမူအကျင့်များနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာ၏ electrophysiological ညွှန်းကိန်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြိုတင်ခန့်မှန်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;57: 774-85 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 1996;19: 319-40 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Neuroleptics နှင့် operating အပြုအမူ: အ anhedonia ယူဆချက်။ ဦးနှောက်သိပ္ပံပြုမူနေ။ 1982;5: 39-87 ။
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Bozarth MA ။ စွဲလမ်းတစ် psychomotor လှုံ့ဆော်သီအိုရီ။ Psychol ဗျာ 1987;94: 469-92 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Rompré PP ။ ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ Annu ဗြာ Psychol ။ 1989;40: 191-225 ။ [PubMed]
သစ်သား PL ။ ကြွက်များ၏ nigrostriatal လမ်းကြောင်းအတွက် dopamine ဇီဝြဖစ်ပေါ် GABAergic အေးဂျင့်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1982;222: 674-9 ။ [PubMed]
yun IA, Wakabayashi KT, Fields HL, Nicola သည် SM ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအတွက်အမူအကျင့်များနှင့်နျူကလိယမက်လုံးပေးတွေကိုမှအာရုံခံပစ်ခတ်ရန်တုံ့ပြန်မှု accumbens ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2004a;24: 2923-2933 ။ [PubMed]
yun IA, Nicola သည် SM, Fields HL ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine နဲ့အချိုမှု receptor ရန်ဆေးထိုး၏ခြားနားသက်ရောက်မှု cue-evoked ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအခြေခံတဲ့အာရုံကြောယန္တရားအကြံပြုအပ်ပါသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004b;20: 249-263 ။ [PubMed]
Zahm DS ။ ယင်းနျူကလိယ၏ functional-ခန္ဓာဗေဒသက်ရောက်မှုတွေ core နဲ့ shell ကို subterritories accumbens ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1999;877: 113-28 ။ [PubMed]
Zhang က XF, Hu XT, အဖြူရောင် FJ ။ ကိုကင်းရုပ်သိမ်းရေးအတွက်မြေတပြင်လုံး-ဆဲလ် plasticity: နျူကလိယ accumbens အာရုံခံအတွက်ဆိုဒီယမ်ရေစီးကြောင်းလျှော့ချ။ J ကို neuroscience ။ 1998;18: 488-498 ။ [PubMed]